Igbo - 01. Conversation - Booklet 7: Ogwe Ụkwụnke Cross Akọwara ndị Alakụba | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 7 The Cross
01. Mkparita ụka na ndị Alakụba banyere Kraịst
7 - OGWE ỤKWỤNKE CROSS AKỌWARA NDỊ ALAKỤBA
Kedu ka anyị ga - esi weta mgbapụta nke Jizọs Kraịst ka ndị Alakụba?
Ihe nke ato na nke ikpe azu bu ihe ikwuru nye onye Alakụba n’ime ibu onye Kraist bu nkwenye ha na egbughi Kraist n’ezie kama na o dika odi ka odi kpogidere ya n’obe. Kedụ ka aga - esi kwere Onye Alakụba Oziọma nke Ọkpara Chineke kpọgidere n'obe n'agbanyeghị nkwenye a? Chọpụta site n’ịgụ aro anyị gbasara otu esi ekwe omume na ndabere nke Agba Ochie, Agba Ọhụụ, echiche ezi uche dị na ya, Koran na akaebe gị.
7.02 -- Ịjụ ọnwụ ọnwụ nke Kraịst na Islam
7.03 -- Nkwa banyere onwu ndu nke Mesaia na agba ochie
7.04 -- Ogbugbu nke Jizos Kraist n'obe ohu
7.05 -- Ihe odide sitere na isi nke Jizos
7.06 -- Amaokwu ndị na-enyere aka na kor'an nke mere ka ọnwụ Jizọs bụrụ ihe a pụrụ ichetụ n'echiche
7.07 -- Iko amara nke puru ikwenye nmehie
7.08 -- Nwa Atụrụ Chineke
7.09 -- Onye àmà nke ahụmahụ
7.10 -- Nnoycha
7.01 -- Ogwe Ụkwụnke Cross Akọwara ndị Alakụba
Onye ọ bụla nke na-agwa Muslim banyere Jizọs na nzọpụta ọ rụzuru nwere ike ịbịaru mkparịta ụka ya ebe ndị Alakụba na-azaghị, ma na-amụmụ ọnụ ọchị. N'ịjụ maka ihe kpatara ọchị ya, o nwere ike ịza, sị:
● Unu Ndị Kraịst na-agbaso mgbidi! A ghabatalarị gị! (Sura al-Fatiha 1:7) Egburughị nwa nke Meri ma ọ bụ nwụọ n'elu obe (Sura al-Nisa '4:157), kama nke ahụ, Allah buliri ya elu n'onwe ya (Sura Al-Imran 3 : 55; al-Nisa '4:158). A kpọgidere obe n'obe ya mgbe ọ bụla.
● Ndị Alakụba ndị ọzọ na-ekwu na Allah dị. Ya mere O zoputara Kraist nke aka ya n'emekpa ahu nke obe. Kama o kwere ka a kpogide Judas, onye raara ya nye n'obe (Sura al-Nisa '4:157). Ọbụna taa ndị Alakụba ka kwenyesiri ike na ọ bụ eziokwu nke ọnọdụ a.
● Onye ọ bụla nke mekwuru ka ọ mata ihe mere ọ ga-eji jụ ikpogide Kraịst n'obe, ọ ga-achọta ihe nke atọ nke akpa aghụghọ nke nna ụgha: Ọ dịghị mmadụ ọbụla, dị ka kor'an si kwuo, nwere ikike na-ebu mmehie nke onye ọzọ tupu ikpe nke Allah (Suras al-An'am 6:154, al-Isra '17:15, al-Fatir 35:18, al-Zumar 39:3, al-Najm 53:38; ), n'ihi na mmadu nile ga-ario maka mgbaghara nke ya site n'aka Onye Nsọ. Dị ka Islam si kwuo, àjà ọ bụla a gbanwere agbanwe agaghị ekwe omume.
● Arumuka nke anọ na-emegide imeghe nke Kraịst, dịka kor'an, bụ: Allah adịghị mkpa onye ogbugbo, ma ọ bụ ọbara ọbara, ụmụ atụrụ na ihe mgbakwunye iji gbaghara mmehie. Ọ bụ eze, ọ na-agbaghara onye ọ bụla ọ chọrọ ma na-eduhie onye ọ bụla ọ chọrọ (Suras al-An'am 6:39; al-Ra'd 13:27, Ibrahim 14:4, Al-Nahl 16:93; al-Fatir 35 : 8, al-Muddathir 74:31). Ọ bụrụ na Chineke rafuo mmadụ, ọ dịghị onye nwere ike inyere ya aka ọzọ (Suras al-Nisa '4:88,143, al-A'raf 7:178,186, al-Ra'd 13:33, al-Isra' 17:97; al- Kahf 18:7, al-Zumar 39:23,36; Ghafir 40:33, al-Shura 42:44,46).
● Ihe iseokwu nke ise, site na ihe ndị e mere site na ala, banyere mkpa ọnwụ ọnwụ nke Jizọs bụ nke kachasi ike. Ọtụtụ ndị Alakụba na-ewere onwe ha dị mma iji mezuo onwe ha site na mgbalị ha. Ha kwenyere na ezi omume ha na-ewepu omume ọjọọ ha (Sura Hud 11:114). Ha na-atụ anya na a ga-azoputa ha, ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ nile iwu ha nyere (Shari'a). Ya mere, ha chere na ha achọghị onye mgbapụta ma ọ bụ obe. Nkwenkwe nke Islam a bụ ihe nketa sitere n'aka ndị Farisii.
● Ndị ọkà mmụta okpukpe n'etiti ndị Alakụba na-ekwu na Allah kpebisiri ike na ihe ọ bụla mmadụ ga-eme n'ọdịnihu, mgbe onye ọ bụla ka nọ n'afọ nne ya, nakwa na ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe iwu Chineke. Ha kwenyere na ọ dịghị ihe na-eme na ndụ mmadụ ma e wezụga ihe e dere banyere ya na akwụkwọ mbụ n'eluigwe. Ha hụrụ na ọ dịghị mkpa ka mmadụ nọ n'obe na ọnwụ ịchụ àjà maka ndị ọzọ.
● Ọtụtụ ndị Alakụba amaghị banyere arụmụka ndị a. Otú ọ dị, dị ka nchịkọta nke isi ihe ndị a, e nwere nkwenkwe omenala na mba Islam, na obe nke Kraịst bụ ihe niile dị nsọ nye ndị Alakụba niile. Ha na-eche na obe ga-abụ ihe mkpuchi maka ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke okpukpe niile chọrọ imebi ikike na omenala ndị Alakụba.
Ikpọgide obe nke onye mgbapụta anyị nwere mgbọrọgwụ miri emi n'ịnọkọ agbakọta, nke a na-apụghị imeri site n'echiche naanị. Ọ gaghị enyere ọtụtụ aka igosi eziokwu ahụ ma ọ bụ ihe obe nke Kraist pụtara n'ụzọ ọgụgụ isi. Anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ha, ka ha ghọta eziokwu ma kwere na ya. A ghaghi imeri mmeri nke ndi Kristain ma wepu aha n'aha Jisos na ihu Chineke n'anya!
Ọ bụrụ na anyị tụlee ịjụ ikpogide na obe na mgbagwoju anya gụnyere mkpokọta ịkpọasị megide Onye Nzọpụta Jizọs, onye nwere ike inwe obi nkoropụ nke iwetara nzoputa nke Kraist nye ndị Alakụba. Otú ọ dị, onye ọ bụla nke na-aghọta nkwa ndị dị n'Agba Ochie dịka nkwadebe nke Chineke maka nzọpụta, ọ naghị ahapụkwa ihe ndị dị na Agba Ọhụụ, ọ bụrụ na ọ na-ewepụta isi ala ma ọ bụ na-emegiderịta amaokwu dị na kor'an na-ezo aka n'obe Kraịst, mmadê naeme ka ya na Pul gbaa àmà na ntêkwaséobi:
"Ebe ọ bụ na a zọpụtara anyị site n'okwukwe,
ayi na Chineke di n'udo site n'aka Onye-nwe-ayi Jizos Kraist"
(Ndị Rom 5:1)
Ihe ise a nke eziokwu bu ihe kariri uzo asaa nke ndi Alakụba. Ka anyị jiri ekpere na-akpọsa mmeri nke Kraịst n'obe ọbụna n'elu ụwa nile nke Islam.
Ọtụtụ ndị Alakụba kweere na ịkọ ọdịnihu nke ihe niile. Onye ọbụla nwere ike igosi ha eziokwu ahụ dị ka Torah, Abụ Ọma na Ndị Amụma na onye mgbapụta ahụ kwere nkwa ga-anwụ n'osisi n'obe anyị, na-ekwupụta mmezu nke amụma ndị a ná ndụ nke Kraịst, nwere ike inyere ndị Alakụba aka ikwere Jesus anwụ n'elu obe. Anyi kwesiri imuta nkwa nke 333 na agba ochie na mmezu ha n'ime agba ohu iji gbanwee onwe anyi na nkwenkwe nke ndị Alakụba na nhazi. Jizos n'onwe Ya meriri Setan na obi abua nke ndi naesozo Ya otutu ugbo site na okwu: "edere ya!" (Matiu 4:4,6-7; Luk 18:31; 21:22, 24:46; Jọn 5:46 na ndị ọzọ).
Mozis na-ebuli agwọ ahụ elu
Jizos gosiputara ihe di nkpa na ihe obula nke onwu ya n'obe nye Nicodemus, onye n'echebe Chineke nke ulo ikpe ndi Ju (Sanhedrin), site n'igosi akuko nke Torah: Dika Mozis weliri agwo n'ala ozara otú a ka aghaghi iweli Nwa nke madu elu, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we nwe ndu ebighi-ebi. (Jọn 3:15)
N'ihe atụ a, Jizọs zoro aka na agwọ ígwè nke Moses ga-edozi dịka iwu Chineke si dị, nke o tinyeziri n'elu osisi. Onye ọ bụla n'ime ndị ụjọ na-ele "ihe nnọchianya nke ọjọọ" a gwọrọ ozugbo ọ bụ ezie na agwọ na-ata ya.
Gini mere Jisos ji jiri onwe ya tụnyere agwo ahu, nke anare anya na obu ihe ojo nile (Jenesis 3:1-15)? N'anya Ya, Jisos weghaara nmehie nke ndi nmehie nile, nke mere na O puta dika odi aru ma nerube isi, dika Pol dere na akwukwo ozi ya nye ndi Korint: Chineke mere ka onye nwe nmehie ghara idi nmehie n'ihi ayi. ka anyi we buru ndi ezi omume nke Chineke nime Ya. (2 Ndị Kọrint 5:21)
Jizos kwusiri ike na odigh nzoputa ozo nke ndi nzoputara nke ndi ojohie duhiere, ma oburu na O nwuru n'onodu ha. Ochoro na oghaghi ah h n'ihi mmehie nke ndi mmehie niile n'elu obe dika ihe ngbanwe anyi.
Jizos - nwa atụrụ nke Ememe Ngabiga
Onye-nwe anyi ji ememe ememe ngabiga nke ememe ya na ndi na-eso ụzọ ya iji gosi na Ya onwe ya bu nwa aturu nke Ememe Ngabiga Chineke. O mere ka ndi mmadu ya rie nri ma kọwaara ndi naeso ya na nkwa nke Ememe ngabiga ga-emezu site n 'onwu Ya nke nwuru anwu (Matiu 26:26).
● Dị ka, mgbe e gbusịrị ya, a na-ese ọbara nke atụrụ mbụ nke ngabiga n'osisi nke ụlọ ọ bụla nke ndị ohu Israel nọ n'Ijipt, ka iwe na ikpe Chineke wee dakwasị ha, n'otu ụzọ ahụ onye ọ bụla ga-etinye onwe ya na ezi-na-e oya n'okpuru nchebe nke obara nke Kraist ga-az oputa site na iwe na ikpe nke Chineke. Ndị Alakụba ghọtara ihe omimi a, n'ihi na ha kwenyere na ọbara anụmanụ a na-egbu egbu nwere ike ichebe ha (Ọpụpụ 12:7, 13,22-23, Ọrụ 16:31).
● Dị nnọọ ka ụmụaka Jekọb ga-eri anụ a ṅara n'ọkụ nke nwa atụrụ Ememe Ngabiga ka ezinụlọ dị n'ụlọ ha, ka ha wee nwee ike maka ọpụpụ ha n'ịbụ ohu, n'otu ụzọ ahụ Jizọs Kraịst, ezi atụrụ nke Ememe Ngabiga, chọrọ ịnọrọ na ndị soro Ya na - eme ka ha sikwuo ike ka ha gbanahụ ohu nke mmehie na Setan (Ọpụpụ 12:3-6, 8-11, 43-48; Matiu 26:26; Jọn 6:35, 48-59).
● Ebe ọ bụ na enweghị mgbaghara n'ejighị ọbara (Levitikọs 17:11; Ndị Hibru 9:22) otu n'ime ihe mgbaru ọsọ nke nwa atụrụ Ememme Ngabiga ahụ na-adịru mgbe ebighi ebi ka Jizọs ji kpuchie mmehie maka ndị niile na-eme onwe ha ka ha dị ọcha site n'ọbara Ya, ha tụkwasịrị obi n'àjà Ya ma kelee ya maka ike nke ọbara Ya (Ndị Hibru 10:14).
● Jizọs kpọrọ ọbara Ọ wụfuru ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ (Jenesis 24:4-8; Matiu 26:27-28), nke O ji kee onwe ya na chọọchị Ya ruo mgbe ebighị ebi. Onye ọ bụla nke na-abanye n'ime mmekọrịta nke ọbara a na-ekpuchi okwukwe kwesịrị ịdị nsọ, dịka Chineke dị nsọ (Levitikọs 11:44). O kwesiri ihn'anya dika Jizos ihn'anya (Jon 13:34) wee gbaghara mmadu dika Chineke gbaghaara ya (Matiu 6:12, 14-15).
Anyị kwesịrị inyere ndị Alakụba aka ịghọta na Nri Anyasị nke Onyenwe anyị bụ mmezu nke nri Ememe Ngabiga n'Agba Ochie. Onye kwere na Nwa Atụrụ Chineke ga-adị ọcha site na nmehie niile ya ma nwee ike ịnweta Jizọs bi n'ime ya.
Abụ ọma nke nhụjuanya
Abụ Ọma nke 22 bụ amụma zuru ezu na-akọwa nhụjuanya nke Kraịst n'obe. Amaokwu ndị a sitere n'ike mmụọ nsọ nye Devid ihe dika 1000 BC. Amụma ya na mmezu ha kpọmkwem na-egosi na e nwere nzube Chineke na ihe a na-apụghị izere ezere mgbe a kpọgidere Jizọs n'obe.
Enwere ihe kariri amuma iri banyere nhụjuanya Kraist n'obe n'ome oma a. Onye ọ bụla dị njikere nwere ike ịchọta nduzi ịghọta na kwere site n'icheta amaokwu ndị a na mmezu ha na ọnwụ Jizọs n'obe:
Abụ Ọma nke 22
6: Ndị mmadụ na-eleda m anya, ndị mmadụ na-elelịkwa m 33, 41-44 29 36-37 -
7a: ndi nile huru m na akwa m uta 33, 41-44 29 36-37 -
7b: ha na-akọcha, na-efufe isi 39 29 - -
8: Ọ tụkwasịrị obi n'ime Onyenwe anyị; ka Onyenwe anyi naputa ya, ka Ya naputa ya, ebe o na-acho Ya 43 - - -
11: ọ dịghị onye ga-enyere aka 42 30-31 37 -
15: ire m na-arapara n'elu ọnụ m - - - 28
16a: ndi-ajọ madu ab͕aworom buruburu 41-43 31-32 - -
16b: ha amawo aka m na ụkwụ m - 24 33 19:18, 20:20
17: Ndị mmadụ na-ele m anya, na-egwu egwu m - - 35 -
18a: ha kewara uwe m n'etiti ha 35 24 34 23
18b: ma nfe maka uwe m 35 24 - 24
1: Chinekem, Chineke m, Gini mere i ji gbapu m? 46 31 - -
Onye obula nke choro amuma ndi agba ochie banyere onwu nke onyenwe ayi Jisos Kraist n'elu obe ghota:
● Olee otú Jizọs na-aghaghị isi hụ ahụhụ Jizọs na-ahụ n'anya ma na-echebara echiche mgbe ndị nke Ya na-amataghị Ya, kama ha lere Ya anya ma kwa Ya emo! N'etiti Middle East ịbụ onye a na-eleda anya, a na-ele ya anya dị njọ karịa ọnwụ!
● Olee otú anụ ahụ Ya ga-esi gbarisie ike na nhụjuanya nke ihe mgbu, ma o beghị ákwá.
● Olee otú mmụọ Ya ga-esi taa ahụhụ mgbe Chineke Nna Ya hapụrụ Ya maka mmehie anyị? AnyŽ ap ghŽ Žmata ihe omimi nke mkpu Ya: "Chinekem, Chineke m, Gini mere i ji rap m?" (Abụ Ọma 22:2)
O yiri ka ndị ụfọdụ na-ekwu na ọ gaghị eche na Chineke hapụrụ Ọkpara Ya ọ hụrụ n'anya n'ezie! Ma Jizọs adịghị agha ụgha. Ọ sịrị: "Ị hapụwo m!"
Mkpesa nke mmadu na-eme mkpesa: Ọ bụrụ na Chineke hapụrụ Ya, nke a ga-abụ ihe ịrịba ama na Jizọs emehiela!
Akwụkwọ Nsọ na-ekwu: Onye na-enweghị mmehie buru mmehie anyị. Mmehie nke ụwa dum nọ na-atụ egwu Ya. N'ihi mmehie anyị, Chineke hapụrụ Ya.
Ụfọdụ na-agbalị imebi ma na-ekwu, nna ahụ zoro ihu Ya site n'aka Ọkpara ahụ wee pụta dị ka ọkàikpe nye Ya n'ihi mmehie anyị.
Agbanyeghị na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu: Ọ hapụrụ Ya n'ezie! E kewara ịdị n'otu nke Mụọ Nsọ. Nke a pụtara hel! Ọ bụ mmalite nke njedebe na ịbanye n'ọchịchịrị. Matthew na Mak kọrọ naanị otu n’ime okwu asaa Jizọs kwuru gbasara obe. Iti mkpu a bụụrụ ụlọ ụka ihe mkpọbi ụkwụ. Kaosinadị, okwu a na-egosipụta, karịa okwu ndị ọzọ niile nke Jizọs, na a zọpụtawo nzọpụta anyị!
Jizos kwup tara: "Chinekem!, Chinekem!" Jekọb gbara mgba na Onyenwe anyị na Jabbok, Jehova chọkwara ịhapụ ya. Ma Jekob ekweghị ka Onyenwe anyị laa n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ bụ onye ikpe mara. Ọ tiri mkpu, "Agaghị m ahapụ gị ma ọ bụrụ na ị gọzieghị m!" Site n'okwukwe ya Jekọb meriri Onyeikpe ahụ wee nata ngọzi Ya (Jenesis 32:23-32). N'elu ọkwa dị elu, Jizọs ekweghị ka Chineke na-ekpe ikpe. O jidesiri Nna Ya ike, obu ezie na Nna Ya arapuwo Ya. Mana site n'okwukwe, O kweghi ka Nna Ya laa. O wee tie mkpu ma kpee ekpere, "Chineke m, ị bụ Chineke m, ọ bụ ezie na apụghị m ịhụ gị ọzọ, agaghị m ahapụ gị ka ị laa - ọ gwụla ma ị zọpụtara ụmụazụ m!" Okwukwe nke Ọkpara nime ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi nke Nna ya meriri ikpe Chineke. Okwukwe ya bụ mmeri nke meriri ụwa (1 Jọn 5:4). Site n'okwukwe ya, a zọpụtara anyị (Jọn 16:33)!
Mgbe ya na Onye nwe ike puru ime ihe mgbaghoju anya, Jekob natara aha ohuru: Israel! Aha a na-ekwu: ya na Chineke gbara mgba ma merie. Jizọs bụ ezigbo Israel! Ya na Chineke gbara mgba maka nzọpụta nke ihe a kpọrọ mmadụ ma merie okwukwe ya! O jidesiri Nna ya ike, ọbụna na obi nkoropụ mgbe Ọ nọ n'ebe dị anya n'ebe Ọ nọ. O kpere ekpere n'ime oge tupu ọnwụ Ya: "Nna, n'aka gị, m na-etinye Mmụọ M!" (Luke 23:46), okposụkedi emi enye mîkemeke ndikụt Ete.
Ọ bụrụ na ị na-echebara nkwa ndị a n'Agba Ochie ma hụ mmezu ha n'Agba Ọhụụ, ị nwere ike ịghọta na Agba Ochie na-agụnye Agba Ọhụụ.
Ohu Chineke Na-ata Ahụhụ
Enwere ike igosi Aịsaịa, onye amụma nke mgbapụta nkwa kachasị mkpa maka ọnwụ Jizọs gbanwere n'Agba Ochie. Anyị na-atụ aro ka ndị niile na-agụ akwụkwọ nta a na-eburu ihe odide pụrụ iche nke mkpughe a. Site na ya ị nwere ike inweta ume dị ukwuu maka mkpụrụ obi gị, nkasi obi ebighi ebi ma nweta azịza zuru oke maka njụ Islam nke obe.
N'ezie O weghaara ike nile
ayima buru mwute anyị,
ma anyị weere na Chineke mebiri ya,
ya, ma mekpaa ya ahụ.
Mana O mere ka o maa jijiji n'ihi mmebi iwu anyi,
e gburu ya n'ihi ajọ omume anyị;
ahụhụ nke mere ka anyị nwee udo dị n'isi Ya,
na site na ọnyá Ya anyị gwọọ.
Anyị nile, dị ka atụrụ, akpafuwo,
onye ọ bụla n'ime anyị echegharịwo n'ụzọ nke ya;
ma Onyenwe anyi adakwasi Ya aje omume nke anyi niile.
Amaokwu atọ a bụ isi nke isi nke a. A gbara onye na-amụrụ ụmụ akwụkwọ na Casablanca ume ka ọ gụọ akụkụ Akwụkwọ Nsọ a n'ihu ndị ibe ya wee jụọ ya ihe ọ chere gbasara onye onye amaokwu a kwuru. Ọ zaghachiri, mgbe e kwuchara nke ọma: "Ọ bụrụ na akụkọ a bụ eziokwu, ọ ghaghị ịbụ na nwoke a nwere ezigbo ịhụnanya!" Nwa-eto eto Muslim ghọtara ihe nzuzo nke ozioma!
Gini mere ndi Alakụba a ji ghara iju nkowa ndia banyere nhụjuanya nke Jisos na onwu ya? Ihe kpatara ya bụ na o sighi asụgharị okwu "cross" na "nwa Chineke"! Edeghị ha na ederede a. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji ghọta ihe mere n'ezie n'obe. Aisaia 53 na-ekwu banyere orù nke ohu ahu nke tara ahụhụ wee nwụọ na ikpe nke Chineke dị ka onye nnọchiteanya maka ndị mmehie ya. Ndị Filipaị 2:7 na-akwado nka, na-atụgharị uche n'ekwupụta Jisọs, onye kpọrọ onwe ya ohu nke mmadụ nile (Matiu 20:28; 2 Ndị Kọrịnt 8:9; Ndị Hibru 2:14,17).
Gịnị ka Aịsaịa 53 ga-agwa anyị na ndị Alakụba niile?
Jizos wedara Onwe Ya ala nke ukwuu ma were kwa oria anyi, omume, nmehie, mmebi iwu, ego anyi, ma tachie anyi ah h n'ikpé nke Chineke. Onye nweayi n'onwe ya na-ekpuchi nmehie anyi niile n'ime Ya. N'ihi mmehie anyị, a kụrụ ya ihe, taa ya ahụhụ, merụọ ya ahụ, emesịkwa gbuo ya.
Na nloghachi, e nyere anyị udo na Chineke na ngwọta nke ọnyá anyị niile n'ihi na O were ha niile n'ime Onwe Ya. Onu ogugu nke onwe ya ka aguchapu ya, nke kwesiri ntukwasi obi, ka o guzosie ike ma di nma rue mgbe ebighi ebi.
Nwa-aturu nke Chineke ahuru ahuhu ga-enwe otutu umu ma mezue atumatu Chineke nke nzoputa - nke di n'etiti ndi Alakụba na ndi Ju. Ọ ga-azọpụta ọtụtụ n'ime mmehie ha, ọ ga-emeli ọbụna ndị siri ike.
Ọ bụrụ na ị na-eburu isi 53 n'isi nke Aịsaịa, site na amaokwu nke otu ruo iri na abụọ, ị ga-enwe ngwá ọrụ siri ike ịkpọsa mmeri nke Jizọs n'elu Islam! A ghaghị kesaa ederede a, gosipụta ya ma gosipụta ya dị ka akwụkwọ (na-enweghị obe ma na-enweghị okwu "Ọkpara Chineke"). N'ụzọ dị otú a, o nwere ike ịpụta, site na n'ime, ịgọnahụ obe obe Kraist.
Amaokwu ndi ozo gbasara ikpogide Kraist n'obe ochie
N'ịchọ nkwa na amụma ndị ọzọ banyere ọnwụ Jizọs na Torah, abụ ọma na akwụkwọ amụma, ị ga-ahụ ọtụtụ amaokwu na mmezu ha n'Agba Ọhụụ:
Chineke gburu anụmanụ ma wụfu ọbara ha na paradaịs iji kpuchie ọtọ Adam na Iv (Jenesis 3:21).
Nwa Iv ga-etipịa isi agwọ ya n'ụkwụ ụkwụ ya, ọ ga-egbu ya (Jenesis 3:15, Mkpughe 12:4,5,15-17).
Onye ahu nke anakwasiri n'elu osisi di n'okpuru nkọcha Chineke (Deuteronomi 21:22, 23; Olu 5:30)!
Ha nyere ya mmanya ka ha ṅụọ (Abụ Ọma 69:22; Matiu 27:33, Jọn 19:29).
N'ime aka gị ka m na - etinye mmụọ m (Abụ Ọma 31:6; Luk 23:46).
Emere ákwà mgbochi nke ụlọ nsọ ahụ (Ọpụpụ 26:31-33; Matiu 27:51).
Onweghi otu n’ime ọkpụkpụ ya nile agbajiri agbaji (Ọpụpụ 12:46; Jọn 19: 33–34).
Etubighi ọkpụkpụ ya (Ọpụpụ 12:46, Jọn 19:33-34).Ha ga-ele m anya, onye ha turu (Zekaraịa 12:10; Jọn 19:37; Mkpughe 1:7).
Mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ na Agba Ochie
N'akwụkwọ amụma ikpeazụ, e nwere nkọwa dị iche nke mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ Judas nakweere mgbe ọ raara Onye nwe ya aghụghọ (Matiu 26:14-16).
Agwara m ha, "Ọ bụrụ na ị chere na ọ kachasị mma, nye m ụgwọ m, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, debe ya." Ha we nye m mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ. Jehova wee sị m, "Tụba ya na ọkpụite" - ọnụahịa mara mma nke ha ji kwụọ m ụgwọ! (Zekaraịa 11:12-13)
N'akwụkwọ a, Yahweh, Onye nwe ọgbụgba ndụ ahụ, kwuru, sị, "Mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ bụ ego ha ji kwụọ m ụgwọ!" Jizọs Ọ Bụ Jehova? Jehova nke ọgbụgba ndụ ahụ ọ ghọrọ nwoke na Jizọs Kraịst (Aịsaịa 40:3-5; 60:1-2; Luke 2:11 na ndị ọzọ)?! E gosipụtara ya banyere Judas maka mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ nye Zekaraya tupu oge ahụ emee!
Eziokwu ebighi ebi ka edere n'ime ihe odide Agba Ochie na n'amaokwu kwekọrọ na Agba Ọhụụ, nke na-agba akaebe banyere ọnwụ Jizọs n'obe. Onye ọ bụla nke chọrọ ịmụta ihe ga-enwe ike ịghọta. A na-agwazi ndị Alakụba na ndị Juu oku pụrụ iche na akwụkwọ ikpeazụ nke Akwụkwọ Nsọ: "Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụrụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ụka!" (Mkpughe 2:7 na ndị ọzọ)
N'ụzọ dị mwute ọtụtụ ndị Alakụba na-ala azụ ịnakwere akụkọ banyere ahụhụ Kraist na Ọnwụ Ya n'elu obe dịka eziokwu nke akụkọ ihe mere eme. Ha na-amụmụ ọnụ ọchị na-eche echiche: Ndị Kraịst dara ogbenye! Ha na-ekwu nke ọma, ma ha na-efu n'ọzara nke echiche ha na aghụghọ ha. Ha na-ahụ Chineke atọ kama otu ma were ya na a kpọgidere otu n'ime ha! Ọtụtụ ndị Alakụba kwenyesiri ike na a kpọgideghị Kraist n'obe.
Otú ọ dị, ọ bụghị ndị Alakụba niile chere otú ahụ. Ụfọdụ dị njikere ige ntị na akụkọ banyere ikpogidere Jizọs n'obe maọbụ ka ha na-ekiri ka ha na-ekiri na fim. Ndị Alakụba abụọ hụrụ ihe nkiri Crusade Campus na ndụ Jizọs. N'ikpeazụ, otu onye gwara onye nke ọzọ: "Gịnị mere ndị isi anyị na-ekwukarị na a kpọgideghị Kraist n'obe? Mụ onwe m hụrụ m ka ọ nọgide n'obe wee nwụọ!" Mgbe ọ bụla o kwere mee, anyị ga-emeghe otu n'ime akụkọ anọ nke obebe Kraịst ma tinye akwụkwọ ahụ n'aka ndị nwere mmasị Muslim, ka o wee gụọ ya n'onwe ya n'olu dara ụda ma zute Jizọs n'okwu ndị a.
Jizos bidoro onwe ya:
Nwa nke madu abiaghi ijere Ya ozi, kama ka Ọ buru orù, nēnye kwa ndu-Ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa nye madu ọtutu. (Matthew 18:11; 20:28; 26:63-64) Ihe dị ka ugboro 80 n'ime oziọma anọ Jizọs kpọrọ onwe ya "Nwa nke mmadụ". Ọ bụ ezie na Ọ, site na okwu a, pụtara dịka Onyenwe anyị na onye ikpe nke ụwa dịka Daniel 7:13-14 si kwuo, O kwusiri ike banyere ọdịdị Ya na nsị Ya dika ohu dị umeala n'obi n'otu oge ahụ. Site na ime nke a, ọ gbanwere ụkpụrụ omenala nile: Onye nke mbụ kwesịrị iche na ọ bụ onye ikpeazụ ma kwue nkwa ikpeazụ. Onye ukwu ga - ehulata ala ma bụrụ onye kasị ala, onye nwere nsogbu ga - ebuli ya elu site n'ịhụ Chineke n'anya (Matiu 20:26-27; 23:11-12; Mak 9:35; 10:44; Luk 22:26-27).
Onye ọ bụla nke na - eso Jizọs ga - abụ ohu, ọ bụghị onye isi! Nke a bụ ụzọ mgbapụ ọhụrụ, kpamkpam nke iche echiche nke ndị Alakụba. Chineke anyị bụ Chineke dị umeala, ma Allah dị mpako (Sura al-Hashr 59:23). Okpukpe Alakụba na-ebuli onwe ya elu, akara nke Kraịst na nke ndị na-eso ụzọ ya na-emerụ onwe ha mgbe nile. Obe nke Kraist choro ngbanwe nke omume anyi, ma oburu na o ga eme ka anyi sụọ ngọngọ.
Na Islam, onye na-eyi ọha egwu nke dị njikere ịchụ ndụ ya iji tọhapụ mba ya na-akpọkarị onwe ya "onye mgbapụta" (fida'i). Kraist bu onye ngbaputa n'ezie (faadi) onye n'ejide ndu ya ka o wepu ndi nile, ndi soro Ya, site na ikpe nke Chineke, site na ike nke nmehie, site na ndu ndi ndu nke Setan, na site na nwu ebighi ebi. Jizọs zụtara nnwere onwe anyị pụọ na ikike ọjọọ niile na-ekechi anyị. Ọ bụ ohu nke onye a na-eleda anya na onye mgbapụta nke ndị ohu Setan. Ịhụnanya na ịdị umeala n'obi Kraịst bụ isi ihe dị mkpa iji ghọta ọnwụ Ya n'obe.
Ihe kacha mkpa Kraist ga-ata ahụhụ
Ụfọdụ amaokwu dị na ozioma nke na-egosipụta nkatọ nke obe nwere ike ịbụ enyemaka na-akatọ ndị Alakụba!
Mgbe ihe akaebe banyere Pita (Matiu 16:16) Jisos kwanyere ọnụ na-ekwuru ndị na-eso ụzọ Ya ùgwù ma chọrọ ime ka echiche ya banyere Mesaịa na-achị achị bụrụ eziokwu nke ohu Chineke na-ata ahụhụ. O kpugheere ya na Ọ ghaghị ịgbago Jeruselem, ka ọ taa ahụhụ, ma nwụọ n'ebe ahụ ka a kpọlite ya n'ụbọchị nke atọ (Matiu 16:21).
Otú ọ dị, Pita tụrụ ụjọ. O chere na Jisos na-enwe obi nkoropu, ma gbaa ya ume: "Ka Chineke chebe gi site n'ajo ojoo a, nke a agaghi eme gi!" (Matiu 16:22). Jisos legidere ya anya ma gua ya Setan (!) Ma si, "Gwam n'azu Setan! ... I bu ihe njo nyem, n'ihi na obugh ihe nke Chineke neche gi, kama obu ihe madu" (Matiu 16:23).
Kedu ka ọ ga - esi mee mgbanwe a na mberede na mkparịta ụka n'etiti Jizọs na ọnụ na - ekwuru ndị na - eso ụzọ Ya? Pita gbalịrị igbochi obe n'obe Jizọs, ihe mgbaru ọsọ na nzube nke O ji ghọọ mmadụ. Jisos mere ka olu olu Setan puta ìhè n'eme ka okwu nke ndi ozi puta, n'ihi na ekwugh ihe obula karia obe nke nwa Chineke, ebe o meriri ya.
Ot'okwu nke okwu nkwugha ahu bu kwa Muhammad, onye kwere ka Chineke me ihe obula iji zoputa Nwa nke Meri site n'obe obe ya.
Jizos mere ka ndi neso uzo ya uzo ato na ihe mere Obia ya bu ime aruhu na onwu Ya (Matiu 16:21, 17:22-23; 20:17-18): ayi negosi na Jerusalem, Agērara kwa Nwa nke madu nye n'aka ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ. Ha ga-ama ya ikpe ọnwụ ma nyefee ya n'aka ndị Jentaịl iji kwaa ya emo ma pịa ya ihe ma kpogide ya n'obe. N'ụbọchị nke atọ a ga-akpọlite ya n'ọnwụ (Matiu 20:18-19)!
Ebe ọzọ Jisos biaruru Jeruselem, ot'onwe ihe omuma banyere nhụjuanya ya na onwu ya, tinyere nbilite n'onwu Ya. Ọ bụ karịa onye amụma. Ọ bụ okwu Chineke n'onwe ya. Ọ na-agwa Nna ya n'eluigwe okwu mgbe niile, bụ onye kpugheere Ya ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu kpọmkwem.
Otu onye chere echiche nke ọma nwere ike ịjụ: "Ọ bụrụ na Jizọs maara ihe a nile, gịnị mere Ọ gbaghị ọsọ ma ọ bụ na-akwaga, dịka Muhammad sitere Mecca gaa Medina? Gịnị mere Jizọs ezoghị ma ọ bụ kpuchie Onwe ya?" Ihe dị mkpa Chineke na-eme ka ọ pụọ! O maara na a gaghị enwe nzoputa maka ihe a kpuru mmadu n'agbanyeghi onwu ya. O rubere isi n'ihe Nna Ya nke bi n'eluigwe nyere ọnwụ! Mkpa a dị iche iche dị iche na ihe na-asọ oyi nye ndị Alakụba!
Jizos ke Gethsemane
Jizos kwusiri, wee kwaa iru uju nke ukwuu na] nw nke o bibia ya, mgbe O kpere ekpere nime ubi oliv n'okpuru mgbidi Jerusalem. Ndị na-eso ụzọ ya na-ehi ụra, ha apụghịkwa inyere Ya aka n'ekpere ha. Ma, o kpere ekpere, sị: "Nna m, ọ bụrụ na o kwere omume, ka iko a si n'ebe m nọ pụọ, ma, ọ bụghị dị ka m si chọọ, kama dịka ịchọrọ." (Matiu 26:39)
Nwoke aho Jizos na mkporo Ya na ozo ya na anopo ikpe nke Chineke nke gaeme mgbe onwe Ya. Ma, Ọkpara Chineke nime Ya meriri ọchịchọ nke anụ ahụ, ma jiri ikwesị ntụkwasị obi mee uche nke Onye ahụ, bụ onye hụrụ Ya n'anya. Obosara Jizos abughi ihe ndi ozo, ma obu ihe ndi ozo, kama agha nke elu igwe na ala mo. Jizos kwetara na Nna Ya na-enweghị ngwụcha ma kpee ekpere nke ugboro abụọ na nke atọ: "Nna m, ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ka e wepu iko a ma ọ bụrụ na m aṅụghị ya, mee ka uche gị mee" (Matiu 26:42)
Eziokwu "Islam" ma ọ bụ ikpuchi isi pụtara ìhè n'ekpere a-ọgụ Jizọs. Ọ dịghị onye na-amanye Ya ka ọ gbasaa ọchịchọ nke nke Nna Ya; Enye ama enen̄ede ama enye ke mbuọtidem eke spirit Ete esie.
Ihe ndị na-eso ụzọ Jizọs mere na ndidi Jizọs
Ndị na-eso ụzọ gabiga ụlọ akwụkwọ kọleji kacha mma n'ụwa na nkuzi bara uru n'ihu onye nkụzi kachasị mma. Mgbe ule ahụ bịara, ka e jidere Jizọs, ha nile mechara nyochaa ikpeazụ. Ha gbabara n'ime ọchịchịrị nke abalị! Pita ji mma agha Ya tie nti onye agha, ma gọnahụ ịmata Nna-ukwu Ya na Onyenwe anyị ọbụna na iyi (Matiu 26:56-769-75).
Olee otú Jizọs si meghachi omume? Olee otú O si mezuo ọdịda nke ndị ọ hụrụ n'anya? O kpere ekpere maka ha ka ha nọ n'elu obe: "Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme." (Luke 23:34) Enye ama okokụre edinyan̄a ofụri ererimbot onyụn̄ ofiori ke utịt ubiak esie: "Enye okokụre!" (Jọn 19:30)
N'oge a, O mekwara ka ndi ezi omume ya dara ada n'onye ezi omume n'enweghi ama ya. Ọ zọpụtara ụwa dum, gụnyere ndị Juu niile na ndị Alakụba nile, na nzọpụta Ya. Jizọs agaghị anwụ ọzọ maka ndị Alakụba ma ọ bụ maka ndị Juu! Ọ hụrụ n'anya ma hụ mmadụ nile n'anya, gụnyere ndị kpọrọ Ya asị. Ọ na-eche ka ha.
Onye isi ochichi Roman a choro ijide n'aka na "Eze ndi Ju" anwu anwu ma tie ube n'olu di ya n'obi. Ọ ga-abụrịrị na ọ ga-egbu Jizọs. Otú ọ dị, ịta ahụhụ nke cross emezuworị nzube ya. Ihe a na-agbanye aka na-egosi na ọ bụ ọnwụ Jizọs. Kedu ka Muhammad ga - esi kwuo, "Ha egbughị ya, ha akpọgideghị ya n'osisi, ọ bụ naanị Ya mere ka ha hụ ya" (Sura al-Nisa 4:157)?
Mgbe Jisos si na ndi nwuru anwu bilie ma gosiputa nime aru imemm] nye ndi zoro ezo zoro ezo na ndi na-atu egwu n'olu n'agbanyeghi onu ozo, O baghi ha mba maka mgbapu ha, ma kelee ha, "Udo diri gi!" (Jọn 20:19) Mgbe ha ghọtara na ọ bụ Ya n'ezie, O gosipụtara ha ọnyá ahụ na aka ya na ụkwụ ya, na ọnya ahụ n'akụkụ Ya (Jọn 20:20). Mgbe ahụ, ha ghọtara na kpogidere ma lie Jizọs dị ndụ, guzo n'etiti ha!
N'ikpeazụ Onyenwe anyị bilitere n'ọnwụ malitere ịkụziri ha atụmatụ nke nzọpụta na Agba Ochie. N'ime ụbọchị 40 ndị a, O gosipụtara ha site na Torah, Abụ Ọma, na Ndị Amụma na Kraist aghaghị ịta ahụhụ iji banye n'ebube Ya (Luk 24:26-27). O we meghe uche-ha, ka ha we ghọta ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, me kwa ka obi sie ha ike, si, ‘’Nka bu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ: Kraist aghaghi ihu ahuhu, si kwa na ndi nwuru anwu bilie n'ubọchi nke-atọ.’’ (Luke 24:46)
Jizos n'onwe ya na-eduzi anyi n'uzo ziri ezi maka ijere Ya ozi n'etiti ndi Alakụba. Mgbe ndị na-achọ Muslim, mgbe oge nke ezi mmasị n'ozi banyere Kraịst, gbapụ ma ghara izu ike n'okwukwe ha, dịka ndị mbụ na-eso ụzọ Jizọs mere: Mgbe ahụ ọrụ anyị bụ ịchịkọta ha ma maliteghachi ihe mmụta Bible ọzọ, dị nnọọ ka Jizọs mere ndị na-eso ụzọ ya!
Nnukwu ihe omimi
Mgbe Jizos kwadebere ndi ozi Ya ka ewe te ha manu nso na Mo Nso dika ihe nmuta nke onwu ya n'obe, ndi neso uzo Jisos si ya, "Onyenwe ayi, gi onwe gi geme ka ala eze Chineke dika Mesaịa nke Israel n'echi ya?" Ha ka na-eleba anya n'okpukpe religio-ndọrọ ndọrọ ọchịchị! Ha amaghi ozi Jizos banyere alaeze nke mmo. Mgbe ụbọchị iri anọ nke nchịkọ pụrụ iche site n'aka Onyenwe anyị bilitere n'ọnwụ, ha adaghachiri ule ahụ ọzọ! Ha ka na-eche n'echiche nke ụwa, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmadụ. Otú ọ dị, oge ha natara ike nke Mmụọ Nsọ, ọhụụ ha na nkwusa ha gbanwere n'ụzọ dị egwu. Ha nwetara obi ike iji kwupụta eziokwu ahụ n'ịhụnanya. Ha gwara ndị na-anụ ọkụ n'obi na ha niile bụ ndị na-egbu ọchụ, na site n'enyemaka nke ndị agha Rom nọ na-adagide Jizọs, Mezaịa ahụ, n'obe (Ọrụ 2:23).
Gịnị ka ìgwè ndị ahụ juru anya nke ndị Juu zara? Ọ dịghị ihe ọ bụla! Ọ bụghị otu okwu! Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ìgwè mmadụ ahụ tiri mkpu, sị: "Kwụsị! Nọrọ jụụ! Anyị egbughị ya, anyị akpọgideghị Ya n'osisi!" kama ha gbachiri nkịtị. Udo nke ndi Ju bu ihe negosi na ihe mere eme bu na ekpogburu Jisos. Ọ bụrụ na ha nwere ntakịrị ohere ịgọnahụ ikpe ọmụma nke obe a, ha gaara eti mkpu ma kwuo okwu n'olu dara ụda. N'agbanyeghị nke ahụ, ha niile gbachiri nkịtị. Ha onwe ha tiri mkpu, "Kpọgide Ya n'obe!" (Matiu 27:22-26; Jọn 19:15).
Peter na ndiozi kwughachiri oku ha ka ha chegharia na otutu oge ma gbagide aka n'eziokwu di otua nke Kraist a kpogidere n'iru ndi mmadu n'ulo uku Chineke, mgbe ha gwusiri onye ngwuru, na n'iru Sanhedrin. Ọ dịghị onye isi nchụàjà na ndị nkuzi iwu nwere ike ịgbagha agba akaebe ha, n'ihi na ha niile etinyela aka n'osisi Jizọs dị ka ndị akaebe na-ahụ anya (Ọrụ 2:36; 3:13-15; 4:10; 7:52 na ndị ọzọ).
Onye obula nke neghota ihe ngbaghara nke ndi ozi ahu n'amaokwu asaa ndia nke Olu oma ma nata otutu ihe ndi Ju a nwere ike ichota ihe siri ike n'ebe ahu maka eziokwu nke ikpogide Jisos. Ndị Alakụba ghọtara na ọ dịghị onye ga-ekwe ka a kpọọ ya onye na-egbu ọchụ ma ọ bụrụ na a mara ya ikpe doro anya banyere igbu ọchụ! Amaokwu asaa ndị a na-egosi na a kpọgidere Kraist n'obe.
Anyi kwesiri ighota na ndi ozi enweghi ike ikwusi aka n'obe Jisos na nbilite n'onwu Ya dika oke mmeri nke Chineke ma oburu na Mo Nso abanye n'obi ha. Ha gaara agbachi nkịtị, enweghị ike ịghọta ihe merenụ, ruo ogologo oge.
Mgbe ị na-agba àmà banyere ndị Alakụba, ịkọwa na ịkụzi ihe agaghị adị ntakịrị ruo mgbe Mmụọ Nsọ na-eme ka uche ha nwee nghọta, dịka Dr. Martin Luther dere, "Ekwere m na apụghị m ikwere na Jizọs Kraịst, Onyenwe m, ma ọ bụ bịakwute Ya site na nke m ezi uche ma ọ bụ ike, ma Mmụọ Nsọ akpọwo m site na ozioma, mee ka m ghọta onyinye ya, mee ka m dị ọcha, ma mee ka m nwee ezi okwukwe, dịka Ọ na-akpọ ma kpọkọta ndị Kraịst nile kwere ekwe nọ n'ụwa ma mee ka ha dịrị n'otu okwukwe."
Ekpere maka nkwadebe na imeghe uche nke ndi Alakụba na imeghari obi ha site na Mo Nso di oke mkpa dika ihe akaebe mara ihe banyere onye bilitere n'onwu, nke di njikere nke oma izute nzuko Muslim.
Ọtụtụ ndị Alakụba adịghị njikere ige ntị na akaebe nke Akwụkwọ Nsọ n'ihi na a kụziiri ha na e mehiela Bible. Maka ndị enyi dị otú ahụ na-ezighị ezi, karịsịa ma ọ bụrụ na ha bụ ndị ọgụgụ isi, anyị kwesịrị ime ike anyị niile iji chọpụta ihe ndị na-egosi na a kpọgidere Kraịst n'obe nke ụwa, nke na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ obere ihe na nkuzi Ndị Kraịst.
Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke oge ochie kọrọ banyere ọnwụ Jizọs, nwa Josef onye Nazaret. Otu n'ime ha bụ Tacitus n'akwụkwọ ya, Annals, nke ọzọ bụ Flavius Josephus n'akwụkwọ ya bụ The Jewish War. Josephus na-akọ n'ụzọ zuru ezu banyere Jizọs na obe a kpọgidere ya n'ime Paịlet n'olu nke VIII, isi 3:3. A nabatara ọrụ ndị a na-eme n'akụkọ ihe mere eme n'ụwa nile ma nwee ike inyere ndị Alakụba ziri ezi aka ichegharị n'eziokwu banyere ọnwụ Jizọs.
Otú ahụ ka ọ dịkwa na Talmud nke Belgium. Ndị Juu biri ndụ na Belgium n'etiti Ndị Kraịst ma nwee azịza mgbe a na-ata ha ụta na obe Jizọs. Ha dere na Jizọs, nwa Josef, nwụrụ. Akwụkwọ a na Talmud dị iche na ịjụ Jisọs site n'aka ndị na-agbaso okpukpe nke okpukpe nke kpebiri na "A ga-echezọ aha ya ma wepụ ya na ncheta niile.
A hụrụ akwụkwọ edemede a na-achọpụta ihe banyere Jizọs n'ebe a na-akpọ Palladium na Rom. Edere nnukwu obe n'elu mgbidi na nwoke nwere isi ịnyịnya ibu nọ n'elu ya. N'okpuru obe, a pụrụ ịhụ onye agha Rom ka o gburu ikpere n'ala ma fee onye a kpọgidere n'obe ka ndị agha Rom ndị ọzọ na-akwa Ya emo. Foto a nke Jisos gosiputara n'ụzọ doro anya na a maraworị obe n'obe Jizọs n'etiti ndị obodo Rom ma kwurịta ya n'ihu ọha, ebe ọ bụ na ndị agha Rom amalitela ikwere na Onye nzọpụta ahụ ha gburu.
E nwere ihe ọzọ na-egosi eziokwu nke akụkọ banyere Jizọs kpọgidere Jizọs n'obe ahụ nke nwere ike ime ka onye ọ bụla Muslim chee echiche. N'oge ọchịchị Jamal Abd al-Nasser na Egypt, Pope John XXIII gbalịrị ikpochapụ ndị Juu bi taa maka ụta nke igbu Jizọs. Otú ọ dị, onyeisi ndị Ijipt ahụ meghachiri iwe ọkụ, ma zaa Pope na TV na mgbasa ozi ndị ọzọ, sị: "Anyị ghọtara atụmatụ gị! Ị chọrọ ịtọ ndị Juu niile na Israel ikpe! Anyị agaghị ekwe ka nke a ma ọ bụ onye gburu Kraịst: Ndị Juu kpogidere Ya na onye ọ bụla ọzọ! " Ndị ndú Muslim, ndị bishọp Kraịst, ndị nchụàjà, ndị ozuzu aturu na ndị ọzọ nwere ọrụ ọchị chịrị ọchị. O doro anya na, iji mara Israel ikpe, Jamal Abd al-Nasser dị njikere ịnakwere na kor'an ahụ mehiere!
Dịka iwu nke Shari'a, ndị ọkà mmụta okpukpe nke Ụlọ Akwụkwọ Al-Azhar nke dị na Cairo ma ọ bụ nke ụlọ ndị ọzọ nke Islam ga-eme mkpesa ma mezie okwu Nasser n'ime otu ọnwa, ma ọ bụghị na ọ ga-enweta nkwenye zuru oke. Otú ọ dị, ndị ọkà mmụta na-atụ egwu onye ọchịchị aka ike ma ọ bụ, ma eleghị anya, ha achọghị ka Israel bụrụ onye ezi omume. Isi ihe di mkpa bu na ndi isi ala nke ndi Ala Islam agbachibido, ya mere, dika iwu Shari'a si kwenye, ha mara na ekpogburu Kraist n'osisi. Ma, ha enweghị ike ikweta nke a n'ezoghị ọnụ, n'ihi na ọ ga-emegide nke amaokwu a ma ama na kor'an. Ka o sina dị, ka ha wee katọọ Izrel, ha nakweere ajọ njọ ahụ!
Taa, ndị Juu na-emesapụ aka na ndị na-eme ihe ike, bụ ndị na-ewepụ onwe ha site na nkwanye ùgwù nke ndị Juu na-ekpe okpukpe ọdịnala, bi na steeti Israel. Ọtụtụ n'ime ha gbalịrị ịchọpụta ihe dị ịtụnanya Jizọs iji weghachite nnukwu onye a, bụ nwanne ya furu efu. Ha kwadoro omumu Jisos na "Nazaret", ma obu ezie na obu onye agha nke ike Rom. Ha kwurula ozizi na ọrụ ebube Ya. Ma gịnị ka ha dere banyere ọnwụ Ya? Hà go ogide Ya n'obe dika Muhammad? Gịnị bụ azịza ha nye ajụjụ a dị egwu? Ha na-akọwa ọnwụ Jizọs dị ka ajọ iwu! Ha anaghị ajụ eziokwu nke obe n'obe ya. Ndị Juu niile na otu olu ga-agọnahụ obebe Jizọs ka ha wepụ onwe ha n'afọ 2000 maka ibu arọ ha n'akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị obere ohere. Ma ha maara na a gaghị agbanwe agbanwe akụkọ eziokwu ahụ ma kwuo maka onwe ha.
Ọ bụrụ na ị na-amụ ihe dị iche iche nke Muhammad banyere ọnwụ nke Isa na kor'an, ị nwere ike ịchọta mmegiderịta onwe ya na nrụgide na-aga n'ihu na àgwà ya n'ebe ndị ahụ nọ. Ọ na-amalite site n'ịnakwere ịnakwere ọnwụ ya ma na-aga na ambivalent mana ọ na-agọnahụ ọnwụ Jizọs. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ adịghị ike na amaokwu ndị a nakwa dị ka o kwere omume na obe Jizọs, nke anyị na-ewetara ebe a maka àmà gị nye ndị Alakụba.
Akwukwo ndi amuma site n'onu umu Israel bu ihe ekwuputara na okpukpu iri na kor'an (Sura al-Baqara 2:61,87,91; Imran 3:21,112,181,183, al-Nisa '4:155,157; al- Ma'ida 5:70). Otu n'ime ihe ndị a na-ekwu, sị:
"Anyị nyere Isa, nwa nke Mary ihe ịrịba ama doro anya ma mee ka ọ dị ike site na mmụọ nke ịdị nsọ. Ị ga - ahụ mgbe ọ bụla onye ozi na - abịakwute gị na ihe ị na - achọghị, jiri mpako kpọọ ụfọdụ ndị ụgha na ndị ọzọ gbuo?" (Sura al-Baqara 2:87)
E dere amaokwu ndị a n'oge oge Muhammad na Medina. Ọ ghaghị ịgọnahụ mmezu nke ndị amụma na Agba Ochie, ma gosi ha dị ka ebubo megide ndị Juu. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ pụghị iche n'echiche na a ghakwara ịtụgbu Nwa nke Meri, ọ bụ ezie na ọ jikọrọ Ya na ndị amụma ahụ e gburu egbu (Sura al-Baqara 2:87, al-Nisa '4:157). Ya mere, ihe nke kor'an bu ihe choro onwu Jisos.
Ọnwụ Jizọs na kor'an
E nwere otu amaokwu dị iche iche na Sura Maryam bụ nke a ga-enwe ike ịghọta na ọ bụ àmà Ndị Kraịst na kor'an. N'amaokwu a Isa nabata onwe ya na kor'an ma chịkọta ndụ ya n'otu ahịrịokwu:
"Udo di n'elu m ub och i amuru m, ub och i m ga-anw u na ub och i a ga-eziga m nd u." (Sura Maryam 19:33)
Muhammad gosiputara nkwenye a nke Isa iji kwado nne ya Mary ma gosiputa na nwa ya abughi nwa akwukwo. Ọmụmụ ya dị n'okpuru ihu ọma Chineke na udo ya. N'ebe a, nbata nke Okwu Chineke na Mmụọ Ya n'ime Kraịst na-enwu nime kor'an (Sura Al-Imran 3:45, al-Nisa '4:171; Maryam 19:20, al-Anbiya' 21:91 , al-Tahrimrim 66:12 na ndi ozo). Obu kwa nkpu nke olu ndi mo-ozi n'onu Betlehem (Lk 2:14).
Kraist gosiputara na kor'an dika nwoke nke udo. O mehieghị (Sura Maryam 19:19), Ọ bụghị onye ajọ omume na-eme ihe ike (Sura Maryam 19:32). Ọ naghị etinye aka na agha, igbu ọchụ ma ọ bụ okwu mkparị. Kraist bu onye na-eme udo, nke bu okwu putara nke okwu Muslim. Ọ bụ naanị ezi Muslim, Onyeisi udo.
Amaokwu a (Sura Maryam 19:33) na-ekpughekwa ihe doro anya doro anya banyere ọnwụ Kraịst. Okwu ndị a egosiwo ihe ịsụ ngọngọ nye ndị na-akọwa Muslim. Ha megharia ihe ha putara ma dee ya na, ghagh, Jisos aghagh inwu anwu, ma obugh na nmalite nke uwa ya, kama nani mgbe odibia nke uzo abua. Ọ ga-alaghachi na-ebibi mbụ na-emegide Kraịst, mgbe ahụ gbuo niile pigs na-ekpochapụ niile crosses. N'ikpeazụ, ọ ga-alụ, nwee ụmụ ma mee ka mmadụ niile (gụnyere Ndị Kraịst niile) gaa Islam. Ọ bụ mgbe ahụ ka Ọ ga-anwụ! Ọnwụ ya ga-abụ "ihe ọmụma nke oge ikpeazụ" (Sura al-Hujurat 49:61). Mgbe olili ozu ya gafee Muhammad na Medina, Allah n'onwe ya ga-apụta n'ụbọchị ikpe, kpọlite Muhammad na Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ ma tinye ha n'ocheeze ka ha wee nwee ike itinye aka na ikpe nke ụwa.
Nghọta nwere ike inyere gị aka imeri mgbagwoju anya a. Amaokwu 23 enweghi okwu a bu "saufa" nke nani ya ga-agafe onwu Isa n'ime ubochi di n'iru, kama kama ikwu ya banyere onwu ya di nso, onwu nke okike, n 'usoro okike, onwu na nbilite n'onwu. Nkọwa ndị ọzọ niile bụ nrọ ma ọ bụ ụgha iji kpuchie eziokwu nke ọnwụ Jizọs.
Enwere uzo yiri nke a na Sura Maryam banyere John Baptist (Yahya), nke kwesiri imebi Isa rue uzo nke Yahya. N'ebe a, Jibril, onye ozi Chineke kwuru, sị, "Udo ga-adakwasị ya ụbọchị a ga-amụ ya na ụbọchị ọ ga-anwụ, na ụbọchị a ga-ezite ya ndụ." (Sura Maryam 19:15)
Jon maara na e gbupụrụ ya isi ma lie ya. Eziokwu a bu ihe omuma ihe dika omuma nke Jizos: omumu omumu, emesia onwu, na nbilite n'onwu n'onwu. Otú ọ dị, n'ọnọdụ Isa, ndị na-akọwa okwu kpachapụrụ anya gbanwee iwu a iji wepụ ohere nke ịnwụ n'obe.
Ma eleghị anya, Muhammad kpọbatara Isa na Yahya iji gosipụta na Isa agaghị abụ nke Chineke. Ma n'agbanyeghị nke a, o kwere ka Isa malite onwe ya dị ka a ga - asị na ọ na - enye "mkpughe" nke eluigwe, ebe Jibril mere ka Jiya mara ya. Na kor'an 'Isa guzo elu karịa Yahya. Nwa nke Meri gosiputara dika mo nke Allah n'anu aru na dika okwu ya, nke meworo ka anu aru, ebe Jonya bu nwa obula nke amuru site na ndi nne na nna mara.
Dika kor'an si di, Isa biri ndu n'enweghi nmehie (Suras Al Imran 3:45, al-Nisa '4:171; Maryam 19:19 na ndi ozo). Ya mere O aghaghi inwu n'ihi nmehie nke onwe ya. Nke a na-enye ohere ịkọwa na ọ nara mmehie niile nke mmadụ niile wee nwụọ n'ọnọdụ ha, ime ka Onye Okike na ụwa dị n'udo site n'ọnwụ Ya. Na kor'an 'Isa kwadoro na udo nke Allah ga-adakwasị ya ọbụna n'ụbọchị ọnwụ ya!
Onye kasị nghọgbu
Amaokwu ọzọ nke na-egosi mmepe nke àgwà nke Muhammad rue ọnwụ Kraịst nwere ike ịchọta ya na Sura Al-Imran:
"Ha ghọgburu, Chineke ghagbusara ya, Allah bụ onye kachasị mma nke ndị nduhie niile, n'ihi na ọ sịrị:" Aịza, m ga-ekwe ka ị gafee (nwụọ) wee bulie gị elu." (Sura Al-Imran 3:54-55)
Dị ka kor'an si kwuo, ndị aghụghọ bụ ndị Juu. Ha gbaliri na nzuzo iji gbuo Isa, ma Allah hụrụ site na atụmatụ ha nke igbu ọchụ tupu oge eruo. Otú ọ dị Allah dị aghụghọ karịa ha niile, Ọ hapụrụ Isa ka ọ gafere n'udo wee kpoo ya n'eluigwe gaa n'ihu ya.
Kedu ihe bu "ihe kachasi uzo nile" nke ndi Koran nekwu na Allah? O zoputara Kraist site n'onwu ime ihe ike site na nkume ma obu n'obe n'obe! N'ụzọ dị otú a, Muhammad gbalịsiri ike iji kpochapụ obe nke Kraịst site n'ịtụghị ya. Okwu atọ gbasara "aghụghọ a" na-adabere na okwu ndị ọzọ dị n'amaokwu a.
Iji kpoo obe nke Kraist Muhammad kpọrọ Allah onye kachasi ihe nile! Akwụkwọ Nsọ jiri okwu a dị egwu maka "agwọ" ahụ na paradaịs (Jenesis 3:1)! N'ịbụ onye nwere obe, mmụọ nke Islam aghaghị ikwupụta onye ọ bụ na ọ bụ! Allah gha ikpughe onwe ya n'ihu cross dị ka "onye kachasị mma nke ndị nduhie niile" (khair-ul-maakirin)! Anyi kwesiri ighota ihe di nkpa nke nkpughe a nke Koran maka onwe ayi na ndi enyi anyi. Na Ndi Efesos 6:11-20, Pol nyere ndi oru nile nke Kraist iwu ka ha ghara ichota ike nke ndi mmadu na ike ha, kama ka ha kpee ekpere, kwere ma jee ozi n'aha Jisos Kraist na ike nke Mo Nso . N'ebe a na-agọnahụ obe nke Kraist, anyị na-ahapụ ebe mgbagha ma banye n'ógbè ndị mmụọ na ndị mmụọ ọjọọ. Ọbara nke Kraịst nọgidere bụrụ nanị nchekwa anyị (1 Jọn 1:5-2: 2), Mmụọ Ya bụ ike anyị naanị (Ọrụ 1:8).
Okwu ọzọ na ederede a bụ "mutawaffika". Allah na-ekwu, "M ga-ekwe ka ị gafere". Okwu a nwere ọtụtụ ihe. Ọ na-egosiputa uche nke "ịrahụ ụra" ma ọ bụ "ịmechaa ndụ mmadụ nke ọma". Muhammad ji okwu a siri ike mejuo Ndị Kraịst nakwa Alakụba. Onye nke mbu O nwuru, nye ndi ozo O nweghi. N'echiche ha na a ratala Isa n'ime eluigwe n'enweghị ihe mgbu. Muhammad bụ onye maara ihe. Ọ na-ekwu okwu ọ bụghị naanị na abụọ, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọbụna n'ụdị uche atọ, na-eji naanị otu okwu!
Nsụgharị Turkish na Indonesian jiri okwu a nke kor'an mejupụtara "M ga-ekwe ka ị nwụọ n'udo", n'ihi na nke ahụ bụ ihe kacha dịrị na mgbọrọgwụ nke okwu a. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị nsụgharị ọzọ na-alụso okwu a ọgụ, iji mee ka ndị na-akọwa Islam kwadoro.
Muhammad na-ekwu, "Agha bụ aghụghọ!" Agha Dị Nsọ, nke na-agụnye esemokwu n'etiti Ndị Kraịst na ndị Juu, juputara na aghụghọ na aghụghọ. Anyị kwesịrị ịgbanwe ụzọ anyị ma bụrụ onye maara ihe! Ọ bụghị ihe niile ha na-ekwu na Islam dị ka a na-ekwu!
Mgbe Muhammad kwusịrị na e zere obe Kraist ma kpochapụ ya site na "aghụghọ" nke Allah, ọ na-eku ume na-agba ume ma gbalịa imeju ndị nnọchianya nke Ndị Kraịst si n'ebe ugwu Yemen, bụ ndị (dị ka akụkọ ndụ Muhammad si dị Ibn Hisham) biara ikwurịta ihe banyere okwukwe na ya na Medina. O mere ka Allah bulie Isa rue onwe ya! Nke a bụ ihe dị egwu na kor'an. Kraịst dị ndụ! Muhammad anwụọla! Dika kor'an 'Isa di ndu na Allah na okwu ya (Suras Al- Imran '3:55; al-Nisa' 4:158; al-Ma'ida 5:110-111,116-118; al-Anbiya ' 21:28 na ndi ozo). Otú ọ dị, Muhammad na-echere n'ogo oge (Barzakh) maka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ụbọchị ikpe. Nke a bụ ihe mere ndị Alakụba nile ji ekpe ekpere maka ya, ka o nwee udo, mgbe ọ bụla ha na-akpọ aha Muhammad (Sura al-Ahzab 33:56).
Mkpụrụ mmụọ n'azụ Islam nwere ike ịnabata Kraist dị ndụ ma na-alọghachi, ma jikọta ya n'ime usoro okwukwe nke Muslim, ma ọ pụghị ịnakwere obe ya na chi Ya! Ya mere, ịdọ aka ná ntị Pọl na Jọn metụtara Islam, (Galatia 1:8-9; 1 Jọn 2:21-27; 4:1-5). Mkparịta ụka ndị ọ bụla nke ndị ozi ala ọzọ na ndị Alakụba kwesịrị, ọ bụghị nanị na ha ga-eme enyi, ma na-agụnye ekpere maka ntọhapụ ha na agbụ ha. Muhammad maara ihe mere o ji dọọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ọ bụla ọbụbụenyi ọbụla na ndị nke okpukpe ndị ọzọ, karịsịa Ndị Kraịst (Sura Al-Imran 3:28, al-Nisa '4:89, al-Anfal 8:73, al-Mumtahana 60:1; , 9). Anyị ekwesịghị ịtụ egwu iso ndị Alakụba na-atụ egwu, n'ihi na ngọzi nke Kraịst siri ike karịa nkọcha nke Muhammad (Matiu 5:44-45, Sura Al-Imran 3:61, al-Tawba 9:29 na ndị ọzọ)!
Okwu a kapiri okwu nke putara ihe putara "ura nwayo" bu nke onwu nke Kraist nke ugboro abuo na kor'an (Sura al-Ma'ida 5:117). N'ebe ahụ, Ọkpara Mary na-agwa Chineke okwu n'onwe ya na mkparịta ụka kpọmkwem, mgbe Ọ rịgoro n'eluigwe ma kwenye na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ekwela ka Ọ gabiga ma weghara ibu ọrụ nke ndị na-eso ụzọ Ya n'ọnọdụ Ya. Uzo di nro nke Kraist bu ihe ekwuru na kor'an na uzo abuo, ugbua ka n'adiri nso, na nso nso di nso na ugbua ka emechara ya, n'adiri ihe zuru oke gara aga, ka onye guru kor'an kwesiri ijide n'aka na Kraist ọ dịghị mgbe a kpogidere ya n'obe, ma a na-ebute ya n'onwe ya na Allah!
Nkwusi nke ikpeazu nke obe n'obe Kraist
Nanị amaokwu dị na kor'an nke na-agọnahụ obe n'obe Isa kpọmkwem (Sura al-Nisa '4:157) na-anọchi anya njedebe nke ọganihu Muhammad na àgwà ya na ọnwụ nke Kraịst. Amaokwu a na-emebi ma na-ekpochapụ "mkpughe" niile gara aga, ma ọ bụrụ na ndị a kwere ka obe nke Nwa nke Meri. Ajuju ajuju nke nkpagbu nke Kraist bu ihe ekwesiri igosiputa ya n'uzo di nkpa, ka o we nye ohere maka obi abua na ntughari uche di iche. Na Sura al-Nisa 'anyị gụrụ:
"Ndị Juu kwuru, sị, 'Anyị egbuwo Mezaịa, Aịza, nwa Meri, onye ozi nke Allah!' - Ha egbughị ya, ha akpọgideghị ya n'osisi, ọ bụ naanị ya mere ka ọ pụta ìhè n'ihu ha! N'ezie, ndị na-ekwenyeghị banyere ya, nwere obi abụọ banyere ya. Ha amaghị banyere ya, mana kwenye n'echiche, ha akpoghi ya n'obe, mana Allah weliri ya onwe ya. Allah di ike ma mara ihe." (Sura al-Nisa '4:157-158)
Ederede a nwere ọtụtụ ọnyà:
● O yighị ka ndị Juu nọ na Medina kwupụtara n'ihu ọha na Ọkpara Mary bụ ezi Mesaịa na onye ozi Chineke! Ha ekwenyeghi na amu nwa nwoke a na-amughi nwoke nke Jisos, ma o bu n'omume Ya. Ha jụrụ Ya kpamkpam dịka Mezaịa ma kpọọ Ya Beelzebul, bụ onye kachasị ndị mmụọ ọjọọ (Matiu 12:24; Mak 3:22-27; Luk 11:14-23). Okwu a dị na kor'an enweghị ike ịmalitere ndị Juu, n'ihi na ha aghọtaghị Jizọs dịka onye ozi nke Chineke, ma zoro ezo ma tinye aha ya kpamkpam.
Otú ọ dị, ọ bụ n'echiche na ndị Juu chọrọ ịdọ Muhammad aka ná ntị na ya ekwesịghịzi inye nsogbu na egwu ha, ma ọ bụghị ha ga-egbu ya, dịka ha gbuola "Kraist" ya bụ Mesaịa. Ọ ga-ekwe omume na ha ji akọ jiri aha Mesaịa ahụ mee ihe egwu.
● Ndị Juu nọ na Medina na-egwu Muhammad ọtụtụ ugboro, yana ndị ahịa nke Mecca. Ma o kwadoro onwe ya site n'ikwu, "Allah kwesiri ntukwasi obi, obugh ihe puru ikwe ka o nye ndi Israel kwesiri ntukwasi obi n'aka ndi Ju ma oburu na obugh na obu na m onwe m puru idaba n'aka ha." N'ihi ikwesị ntụkwasị obi nke Allah na nchekwa nke ya, ọ jụrụ iyi egwu ha ma jiri iwe kwuo, sị, "Ha egbughị ya, ha akpọgideghị Ya n'osisi!"
● N'ebe ọ bụla, Muhammad ekwughị na e gburu Jizọs na kpogidere. Nanị ihe o kwuru bụ na ọ bụghị ndị Juu gburu Kraịst! Ma eleghị anya, ọ nụrụ na ndị Juu na-emekarị ka ha kpọgide ndị iro ha n'osisi, ma na ha tụrụ ha nkume. N'okpuru ike Rom nke bi na ha enweghi oke ikike ikpe mmadu n'onwu ma obu gbuo ya. Ya mere Muhammad n'echiche bu ihe ziri ezi! Ndị Juu egbughị ma ọ bụ kpọgide Jizọs n'obe! Okwu a nke kor'an, n'echiche a, ziri ezi na nkwekọrịta anyị na ya nwere ike ibelata esemokwu n'etiti Ndị Kraịst na ndị Alakụba.
N'ụwa nile a maara na ndị Rom kpogidere ọtụtụ puku ndị ohu na-enupụ isi na ndị omempụ mba ọzọ. Ya mere, amaokwu a dị na kor'an na-enye ohere na ọ bụ ndị Rom bụ ndị kpogidere Jizọs n'obe.T aa ndị Alakụba na-emesapụ aka, bụ ndị chọrọ ịkwanye mmiri na Iso Ụzọ Kraịst, kwupụtara nkwenye a na-egosi na ha nwere ike ịkọwa kor'an.
● Muhammad ji ihe odide na-adịghị ahụkebe kọwaa na e mere ka Kraist "yiri" nye onye a kpogidere n'anya ndị Juu (shubbiha lahum). Ọ gọnahụ obe n'obe Kraist dịka eziokwu nke akụkọ ihe mere eme, ma kwuo na ọ bụ naanị ya ka e mere ka ọ bụrụ "onye a kpọgidere n'obe," dị ka ihe ọkụkụ.
Muhammad nwere ike ịnụ banyere otu òtù ndị Kraịst na ndagwurugwu Naịl nke kwubiri na ọ ga-abụ na Chineke ukwu ahụ aghọwo ụmụ mmadụ na aghaghị imezu mkpa nile nke mmadụ. Ha kwenyere na ọ bụ naanị Chineke pụtara dị ka mmadụ, ma ọ bụghị mmadụ. Ha zikwara na Kraịst, dịka ezi Chineke, enweghị ike ịnwụ ma ọ bụ kpọgidere ya n'obe, ma ọ bụ naanị na ọ dị! Mgbe Muhammad nụrụ nke a, ọ hụrụ ozugbo ya ohere wee sị, "Ndị Kraịst dara ogbenye! Ha na-eche ma kwere na Kraịst nwụrụ n'ihi ha n'obe, ma Ọ bụ naanị ha mere ka ha hụ ya n'obe." Muhammad dị iche iche na-eduhie ma ọ bụ na-eduhie ugboro ugboro site n'òtù ndị Kraịst.
Ndị na-ekwu okwu Muslim etinyewo ọtụtụ echiche efu iji kọwaa ụdị nke a "e mere ka ọ pụta ìhè n'ihu ha". Akụkọ ndị a na-atụghị anya ya na-aga n'ihu na mba ụfọdụ n'etiti ndị Alakụba taa:
- Ụfọdụ na-ekwu: Saịn nke Cyrene gbara ndị agha Rom ume ka ha buru obe maka ịpịa Jizọs ma mee ka ọ daa mbà. Mgbe ha rutere n'ebe a ga-akpọgide obe n'obe ahụ, ha zọhiere n'obe Jizọs kama ịbụ Kraịst. Nwa nke Meri jere ije n'enweghị ihe ọ bụla.
- Ndị ọzọ na-asị: Allah dị nnọọ! Enye ama ada mbiet Jesus ke iso Judas, emi ẹkekọn̄de Judas ke eto. Otú ọ dị, Aịsịa, bụ onye e mere ka ọ dị ka Judas, hapụrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Mgbe Onye Kraịst na-ekpe okpukpe ọdịnala nụrụ akụkọ a, ọ jụrụ ndị Alakụba na-ekwu, sị: "Ì chere na Mary, nne Jizọs, nke guzo n'okpuru obe Jizọs, enweghị ike ịmata ọdịiche nwa ya nwoke Judas na-ada n'elu ya? chere na Allah ga-eduhie ụmụ nwanyị kachasị mma n'ụwa a na nke ọzọ (Sura Al 'Imran 3:42) ma na-eduhie ya ka o wee ruo uju ruo ọtụtụ awa maka onye na-anwụ ọnwụ, mgbe nwa ya nwoke agbapụla? agaghị eche ".
- Ndị ọzọ na; azọrọ na: a kpọgidere Kraist n'obe n'ezie. Mgbe chi jiri n'ehihie wetara ọchịchịrị n'elu ala, ma ọtụtụ ndị na-ezo na egwu ndị mmụọ ọjọọ. Mgbe ahụ, ala ọma jijiji ahụ gbasiri ike ma gbaa ha niile ọkụ, ọbụna ndị agha Rom na-achọ ebe obibi. Mgbe mmadu nile hapuru, Kraist dakwasiri n'obe na Golgot naanị ya, ya mere, o si n'osisi Ya rigo - dika ndi Ala Ahmadiyya kwuru na ha jere na Kashmir. N'agbanyeghị nke ahụ, n'ebe a na-ahụ maka Isa na Srinagar, anyị ji anya anyị hụ na ọ bụghị Kraịst nwa nke Meri e liri ya, kama nna nna nke ezinụlọ Kashmiri dị mma, onye Sheikh Muslim bụ Isa, nakwa na ili ya ezighi ezi ekwuru na Kraist ahu bu Kraist site na òtù Ahmadiyya.
Ịgbalị ime ka ndị Alakụba kwenye banyere ikpogidere Jizọs n'obe dịka akụkọ ihe mere eme bụ obere ihe ọ bụrụhaala na ha onwe ha anaghị ajụ nkọwa. Nsogbu kasịnụ na ozi n'etiti ndị Alakụba bụ nkwenye ha na ha adịghị mkpa onye mgbapụta, onye ogbugbo ma ọ bụ àjà mgbapụta. Ha amaghi ihe ojoo ha di omimi. Ha chere na ha nwere ike idozi omume ọjọọ ha na ezi ndị mmadụ (Sura Hud Hudson 11:114; al-'Ankabut 29:7, al-Fatir 35:29-30). Obu nke inye aka igosiputa obe n'obe nke Kraist nye ha, oburu na ha chere na ha achugh onye ngbanwe ma obu onye nzoputa. Ha kwenyesiri ike na ha dị mma n'ime onwe ha!
Ime ka ha mata otua furu efu ma mara ha ikpe, dika madu nile, bu mgbe ufodu karia nghota ha banyere uzo di ndu site na onwu Kraist n'obe. Ha kwesịrị ibu ụzọ mụta na ọ bụrụ na Chineke etinyeghị aka na ha ga-aga hell!
Abụ ọma nke nchegharị na-enye aka dị ukwuu n'igosi eziokwu a (Abụ Ọma 6:2-10, 32:1-11, 38:2-32, 51:3-19 na ndị ọzọ). Anyị na-akwado ka ndị Alakụba na-ebuli Abụ Ọma nke 51 isi, nke mere na ha ga-ejupụta na mmụọ nke nchegharị. Okwukwe nke onye Alakụba anaghị abanye site na isi ruo n'obi, ma n'ụzọ dị iche, site n'obi ruo n'isi. Nke a bụ ihe nzuzo zoro ezo.
Mgbe a gwara onye bụbu onye Alakụba islam ka ọ na-agụ Abụ Ọma nke 51 maka usoro redio, n'ụzọ yiri nke ahụ ka a na-agụgharị kor'an, anya mmiri kwụsịrị na mberede. Ọ bụghị nanị na ọ gụrụ ihe ederede ahụ nke ọma, ma o kpere ekpere ma chọpụta na ya bụ onye mmehie. Abụ Ọma nke 51 bụ ụlọ nchegharị maka anyị niile. Ọ na-egosi anyị onye anyị bụ. Amaokwu ndị a nwere nduzi miri emi nye ndị niile nwere afọ ojuju:
Ọma 51:3 Onye mmehie na Abụ Ọma nke 51 rịọ maka ebere na amara. David ama ọfiọk ke imọ idikeheke ndifen nnọ. Ọ na-arịọ na Onyenwe anyị ga-ehichapụ mmehie ya niile, ọ bụghị naanị ụfọdụ n'ime ihe ndị o mehiere, nakwa na dịka ebere Chineke na-enweghị nsọtụ si dị.
Ọma 51:4 O chere na o ruru unyi n'ime aru ya, nkpuru obi ya na mmuo ya, ma rịọ ka o wepucha nmehie kpamkpam site na nmehie ya nile nke jọgburu onwe ya.
Ọma 51:5 O wutere ya nke ukwuu na ọ bụ mmehie ukwu ya. O wutere ya. Mmụọ Nsọ enyeghị ya ezumike. Ọ pụghị iche echiche ma ọ bụ na-ehi ụra n'udo!
Ọma 51:6 Ọ ghọtara: Sin pụtara nupụ isi megide Chineke, onye okike na onyeikpe. O kwetara na mmehie abụghị naanị mmejọ ma ọ bụ ihe ọjọọ, ma ọ bụ mmejọ na ebube na ịdị nsọ nke Chineke. O kwupụtara, sị: "Ikwesịrị, n'agbanyeghị otú i si ekpe ikpe m, aghọwo m onye ikpe mara oke ma mebie ikike m."
Ọma 51:7 E merụrụ m kpamkpam. Ugbu a mgbe nne m tụụrụ m ime, m ketara anụ ahụ na mmehie nke ndị nna ochie m. E mebisịla m kemgbe m bụ nwata. Anụ m, mmụọ m, obi m, ọchịchọ m, ihe niile dị njọ.
Ọma 51:8 Onyenwe anyị, ị chọrọ ịnụ eziokwu ahụ. Ana m ekwupụta mmehie niile m zoro ezo. I gosiwo m onye m bụ n'ezie.
Ọma 51:9 Ọ bụrụ na hyopop, osisi a na-eji maka disinfection n'oge gara aga, ga-enyere gị aka, saa m n'ime na n'èzí ya. Sachaa m kpam kpam site na mmehie m, mgbe ahụ, m ga-adị ọcha karịa owuru.
Ọma 51:10 Nyeghachi m ọṅụ m, n'ihi na nkoropụ abụghị ngwọta ikpeazụ nye gị. I mebiwo mpako m, mana i nwere ike, kasie m obi n'ime obi m.
Oma 51;11 Biko, ezonarila m, gwam okwu. Gbaghara, ihichapụ na ihichapụ ihe ọjọọ m niile!
Ọma 51:12. Naanị mmeghari ohuru ohuru nwere ike izoputa m:
12 Mee m obi dị ọcha, m Chineke, ma mee ka mmụọ na-eguzosi ike dị n'ime m.
13 Ajụla m n'ihu gị. Ejila m Mmụọ Nsọ gị.
14 Weghachiri m ọṅụ nke nzọpụta gị ọzọ, ma mee ka m dị njikere irubere Gị isi.
Anyị kwesịrị ịrịọ maka amara Chineke iji nyere ndị Alakụba aka ịghọta mmehie ha na nke a ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọzọ, dịka anyị onwe anyị kwesịrị ichegharị na ha. Abụ ọma a nwere ike ime ka onye ọ bụla na-ekpe ekpere ka ọ chegharịa, ruo mgbe ọ matara na ọ bụ naanị mmụọ gbajiri agbagọ na obi gbagọrọ agbagọ nwere ike ime Chineke obi ụtọ.
Ndị ọzọ na-ejere Kraịst ozi na-eji Iwu Iri ahụ, Fall nke Adam (Jenesis 3:1-4,16) nakwa karịsịa ọhụụ nke Aịsaịa 6:1-8 maka ịkwanye mpako nke ndị Alakụba nwere afọ ojuju. Mgbe Aịsaịa ghọtara ịdị nsọ nke Chineke, nnukwu onye ụkọchukwu na onye amụma ahụ ji oké olu kwuo, sị: "Ahụhụ ga-adịrị m, n'ihi na adịkwaghị m, n'ihi na abụ m onye na-adịghị ọcha egbugbere ọnụ, m na-ebi n'etiti ndị na-adịghị ọcha egbugbere ọnụ, n'ihi na anya m unu ahuwo eze, bú Jehova nke usu nile nke ndi-agha." (Aịsaịa 6:5)
Anyị kwesịrị ịrịọ Jizọs ka o kpughee onwe ya ka ndị Alakụba na-achọ ọdịmma onwe ya nanị, ka ha wee daa ma ghọta oke ịhụnanya na ịdị nsọ nke Onyenwe anyị ka ha rịọ maka ebere. Enweghị nkwupụta mmehie, ọ gaghị abụ nchegharị ma ọ bụ mgbaghara. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kọwaa Muslim ihe kpatara mmehie, tupu anyị ekwupụta maka obe. Otú ọ dị, ọhụụ a bụ onyinye nke amara n'aka Onye Nzọpụta anyị (Ndị Rom 2:4). Anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ya.
Ndị Alakụba nile ọ ga-aga hell?
E nwere amaokwu obi tara mmiri na kor'an na-ekwu na ndị Alakụba nile ga-aga hell! Ọkụ bụ ebe ha ga-aga. Na Sura Maryam Muhammad juru ndị Alakụba niile ụjọ:
Enweghị onye n'ime unu nke na-agaghị abanye na ya (hel).
Nke a bụ iwu dị iche iche a kara aka n'elu Onyenwe gị.
N'ikpeazụ, anyị ga-azọpụta (gbapụ na ya) onye na-atụ egwu Chineke ma debe ndị na-ezighị ezi na ya na ikpere ha. (Sura Maryam 19:71-72)
Ụfọdụ ndị ohu Onyenwe anyị chọpụtara na amaokwu ndị a mere ka ọtụtụ ndị Alakụba ghọta na ha bụ ụdị ọgwụgwọ. Olileanya Islam maka mgbapụta site n'ọkụ a na-apụghị izere ezere bụ, na-adabere n'ịmezu Shari'a, iwu islam. Naanị Jizos gafere n'ọkụ ala mmụọ nke iwe Chineke n'ọnọdụ anyị, ka e wee ghara ikpe anyị ikpé (Jọn 3:18-23; 5:24 na ndị ọzọ). Ịhụnanya ya na-ekpughe ihe anyị na-eme, nganga na mmehie, ka anyị wee jiri obi ekele nakwere nzọpụta Ya zuru ezu na ndụ ebighị ebi ya.
Ozugbo Jizos nyere amara Muslim amara maka nmehie nke aka ya na ikpé ya, anyi kwesiri igosi ya na o bu Nwa aturu Chineke dika nani ya, n'ihi na O wepuru nmehie nke uwa, tinyere obi amamikpe nile nke ndi Alakụba (Jon 1 : 29-34; 1 Jọn 2:1-2 na ndị ọzọ).
Na ememe ha nke Adha, na njedebe nke njem ha na Mecca, ma n'otu oge na mba nile Alakụba, ndị Alakụba na-egbu ụmụ atụrụ, atụrụ, ebule ma ọ bụ kamel, otu maka ezinụlọ ọ bụla, iji hụ na ngọzi nke Allah ga-anọgide na ha. Ot'odi, ha amagh ihe ihe ndi obara di na Agba Ochie, ma obu ihe puru ime ka ha di ka ngbanwe maka nmehie ayi, na ime ka ha di ndu site na ọbara ha awusi. Ya mere, ọ nwere ike inyere ụfọdụ ndị Alakụba aka ịkụziri ha iwu maka mmehie na àjà nsure ọkụ n'Agba Ochie (Levitikọs 4:4,14,24,33 na ndị ọzọ), ma ọ bụ banyere na-atụ egwu n'ụbọchị oké nkwekọrịta (Levitikọs 16:6-10). Ya mere, ha nwere ike ịbịaru ezi Chineke ahụ dị nsọ nso, ma ghọtakwuo nzube nke àjà anụmanụ ndị mbụ na agba ochie nke ka mma.
Ntụgharị uche na nwa atụrụ Ememe Ngabiga dị ka Jizọs ji ya na ndị na-eso ụzọ ya jiri na-ewebata Nri Anyasị nke Onyenwe anyị nwere ike iduga n'ịhụ na Chineke na Chineke dịghachi ná mma site n'ịchụ onwe onye n'àjà nke Jizọs Kraịst.
Ebe kacha mkpa maka ịghọta na ikwere na Nwa Atụrụ Chineke ka na-anọgide na-egosi Agba Ochie nke "Ohu nke Onyenwe anyị": Aịzaya 53:4-12. Oziọma a n'Agba Ochie aghọwo nkasi obi ebighi ebi ma nyere ọtụtụ ndị na-achọ aka ịghọta njirimara site na amara, mgbe akọnuche ha na-ata ha ahụhụ. Okwukwe nke onye nlekọta nke Queen Candace si Etiopia bụ ihe doro anya na nke a (Ọrụ 8:26-39).
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iji okwu nke Koran mee ka Chineke nye Abraham iwu ka ọ ghara ịchụ nwa ya nwoke bụ Aịzik n'àjà. N'ebe ahụ Allah na - agwa ya:
"Anyị ejiriwo nnukwu àjà a gbapụtara ya." (Sura al-Saffat 37:107)
Okwu ikpe a na-eme ka mgbalị nile nke Muhammad dị na kor'an mebie mmekọrịta ọ bụla na Allah. Ihe a nke a na-akpọ "mkpughe" na-ekweta na ọ ga-ekwe omume na Chineke ga-eme ka ọ dị ná mma site n'onye a chụrụ! Mgbapụta zuru oke nke Aịzik emeghị site n'okwukwe ya ma ọ bụ ọrụ ọma ya, kama ọ bụ site na amara! Ọ dị anyị mkpa ime ka ndị Alakụba mara amaokwu a dị mkpa na kor'an, ebe ọ na-ekwu banyere àjà "dị egwu," bụ nke e nwetaworị tupu e gbuo ebule ahụ na-eme ihe mgbapụta ahụ. Ọbụna taa, ndị Alakụba na-anwa ịchọta onye ma ọ bụ ihe bụ onyinye nke Chineke nke dị ichiiche maka nzọpụta nke Aịzik. Anyị maara ihe nzuzo a: Jizọs Kraịst bụ ezi Nwa-atụrụ Chineke, onye na-ewepụ mmehie nke ụwa. O zokwara umu Abraham nile.
Ụfọdụ ndị Alakụba nwere ike ịjụ na Abraham gbalịrị ịchụ Ishmael, ọ bụghị Aịzik, iji nyefee ndị Arab na ndị Alakụba ngọzi ndị a (Sura al-Saffat 37:8-14). Ma, kor'an ekwughị aha nwa Abraham nke a ga-egbu. Ruo oge nke al-Tabari, ndị ntụgharị okwu nke Islam aha ya bụ Aịzik dị ka nke a ga-achụrụ. Naanị mgbe e mesịrị ha gbanwere nkọwa ha nye Ishmael.
Ndị Alakụba na-achọ ịma, ga-ekwupụta na kor'an na-edepụta ugboro ise nkwupụta siri ike (Sura al-An'am 6:164, al-Isra '17:15; Fatir 35:18 al-Zumar 39:7; al- Najm 53:38):
"Ọ dịghị onye ọ bụla na-ata ahụhụ (na mmehie) onye nwere ike ibu ibu (mmehie-) ibu nke onye ọzọ." (Sura al-An'am 6:164)
Amaokwu a na-ekwu n'ezoghị ọnụ na ọ dịghị onye na-edochi onye nwere mmehie n'onwe ya, nwere ike imegide ma na-ebu mmehie onye ọzọ. Iji zaa nke a, anyị ga-achọpụta na kor'an ọtụtụ ugboro na-agba akaebe na Kraịst nọ n'enweghị mmehie; nke emesiri emesia ka emesiri ya nelu igwe (Suras 'Im' 3:44, 45, al-Nisa '4:158,171; Maryam 19:19, al-Anbiya' 21:91, al-Tahrim 66:12 na ndi ozo). Site n'idi nso nke Kraist, amaokwu ise di iche iche nke Qur'an nke na ekwu okwu megide ime ka onye ozo dochie anya apuru iji gosiputa ihe di iche: "Onye ngbanwe nke n'enweghi nmehie, nwere ike ibu ibu ndi ikpe ndi ozo!"
Jizos na onyinye nke onwe ya n'ihi ihu n'anya ndi nmehie nile bu nani nzaghachi aka nye ala Islam. Aha Jisos ka bu ihe omume ya: "O geme ka ndi ya no na nmehie ha." (Matiu 1:21) Ọnwụ ya gbanwere ihe ùgwù nke ebere maka anyị nile. Nkwa nke Kraist bu ihe doro anya: "Nwam, nwa m, agbagharawo gi nmehie gi!" (Matiu 9:2; Luk 7:50 na ndị ọzọ)
Muhammad enweghị ike ikwu ụdị okwu a. Ọ dịghị mgbe ọ chere na ọ nwụrụ n'ebe ndị Alakụba nọ. Ọnwụ ya ga-abụkwa n'efu, n'ihi na Allah nyere ya iwu ugboro ugboro ịrịọ maka mgbaghara mmehie ya (Suras Ghafir 40:55, Muhammad 47:19, al-Fath 48:2, al-Nasr 110:3).
Mgbe a wụsịrị Mmụọ Nsọ, dị ka ihe si na àjà mgbapụta nke Kraịst, ndịozi ghọtara ma kwuo banyere mgbapụta ha site na ọnwụ Jizọs na ịhụnanya siri ike. Pita onyeozi kwupụtara, sị: "Ejighị ihe ndị a na-apụghị ire ure gbapụta unu, dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, site n'omume na-adịghị ọcha unu nwetara site n'aka nna unu hà, kama site n'ọbara dị oké ọnụ ahịa nke Kraịst, dị ka nwa atụrụ na-enweghị mmerụ na n'enweghị ntụpọ." (1 Pita 1:18-19)
Jọn onyeozi kwadoro ozi a: "Ọ bụrụ nà anyị na-eje ije n'ìhè ahụ dịka ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị nwere mmekọrịta, ọbara nke Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie , anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị .Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi ma dịka ịgbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụ anyị ajọ omume niile." (1 Jọn 1:7-9)
Pọl onyeozi na-ede, sị: "Ozi nke obe bụ ihe nzuzu nye ndị na-ala n'iyi, ma nye anyị ndị a na-azọpụta ọ bụ ike nke Chineke .... Anyị na-ekwusa Kraịst kpogidere, nye ndị Juu ihe ịsụ ngọngọ na Ndị Grik bụ ndị nzuzu, ma ndị a kpọrọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kraịst ike nke Chineke na amamihe nke Chineke." (1 Ndị Kọrint 1:18, 23-24)
Rev. Iskandar Jadeed kwupụtara, sị: "Mgbe m bụ nwata, enwere m ahụhụ site na nwunye anọ ndị nna m nwere na arụmụka arụmụka dị n'etiti ezinụlọ anọ anyị bi n'okpuru otu ụlọ. N'oge nkasi obi, oge mberede, m ghọtara ihe Jọn dere:" Chineke hụrụ n'anya ụwa nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi ma nwee ndụ ebighi ebi." (Jọn 3:16)
N'India, nne nke na-enweghị ike ide ma ọ bụ gụọ ma mụọ ụmụ iri na abụọ rịọrọ ka e mee ya baptizim, mgbe di di ya bụ Muslim ghọrọ Onye Kraịst. Pastọ ahụ enweghị obi abụọ banyere ime baptizim, n'ihi na o chere na ọ chọrọ ime ya iji mee di ya obi ụtọ. Mgbe ọ jụrụ ya ihe kpatara ya dị ka nwanyị Muslim na-arịọkarị ka e mee ya baptizim, ọ zaghachiri anya, "Jizọs Kraịst gbaghaara m nmehie m nile n'elu obe ma tinye ndụ ebighi ebi n'ime obi m."
Kedu ihe bụ akaebe gị?
Kedu amaokwu Bible nke gosipụtara okwukwe gị n'ụzọ doro anya? Kedu ihe ị nwere ike ịkọrọ banyere Onye ahụ nwụrụ n'elu obe maka gị? Anyị kwesịrị iwepụta oge iji chegharịa ma kpee ekpere gbasara àmà anyị nye ndị Alakụba na mba anyị. Ọnụ ọgụgụ ha na-eto eto mgbe niile. Ọ bụ na ọ dịghị ihe ọbụla n'obi gị iji weta ozi nke nzọpụta ahụ nke mezuru maka ha nke ọma ka ha wee ghọta?
7.10 -- N N Y O C H A
Ọ bụrụ na ị mụọ akwụkwọ a nke ọma, ịnwere ike ịza ajụjụ ndị a n'ụzọ dị mfe. Onye ọ bụla zara 90% nke ajụjụ niile n'akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a n'ụzọ ziri ezi, nwere ike inweta akwụkwọ ikike site na etiti anyị
aka maka iduzi mkparita uka Ndị Alakụba banyere Jizọs Kraịst
dị ka agbamume maka ọrụ ị ga-arụ n'ọdịnihu maka Kraịst.
N'ihi gịnị ka ọtụtụ ndị Alakụba ji chee na obe n'obe Kraịst bụ ihe efu?
Gini mere ufodu ndi Alakụba ji chee na ekpogidere Jizos n'obe kari Kraist?
Ugboro ole ka kor'an na-ekwu na "Ọ dịghị onye nwere ike ibu mmehie nke onye ọzọ"?
Gịnị mere ndị Alakụba ji ekwu na Allah nwere ike ịgbaghara onye ọ bụla ọ chọrọ, mgbe ọ bụla ọ chọrọ nakwa na ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ àjà maọbụ onye na-anọchite anya ya?
Gini mere ndi Ala Ala ji nwee olile anya (na efu) na ezi omume ha gaekpofu ihe ojoo ha?
Ruo n'ókè ha aṅaa ka nkwenkwe Islam si bụrụ onye akaebe megidere okwukwe na nzọpụta site na Kraịst?
Gịnị mere cross ji bụrụ "nkwanye" maka ndị Alakụba niile, ọ bụrụgodị na ha amaghị amaokwu na Shari'a?
Gini bu ihe imemmo nke eziokwu ah na ndi Alakuba ta jikotara onwe ha site na mmo nke naemegide obe?
Ntak emi Jizos eketịn̄de aban̄ikọ emi Mozis ekenyenede ke ọzara nte enye ọkọdọhọde ke idụhe edinyan̄a edieke ẹkerede enye ke eto? Ndi Jizos a kpogidere bu ihe ojoo dika agwo?
Gịnị ka nwa atụrụ Ememe Ngabiga wetaara ndị Hibru bụ ndị ohu n'Ijipt na gịnị mere Jisos bụ nwa atụrụ Ememe Ngabiga? Olee nnukwu ihe ize ndụ ga-echebe anyị na gịnị mere anyị ji eri anụ Ya?
Amụma ole ka ị ga-achọta n'Abụ Ọma nke 22 nke Jizos mezuru dị ka Oziọma ndị ahụ si dị? Kedu n'ime amụma ndị a nwere ike iche n'echiche gị kwenyesiri ike na Kraist kpogburu n'ezie?
Gịnị mere Jizọs ji kpee ekpere, sị, "Chineke m, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m?" Nna Ya ò rapuru Ya n'ezie? Òkè nke Atọ n'Ime Otu dị nsọ kewara site n'obegide Kraist? Gịnị ka ekpere a pụtara?
Gini mere okwu nke Aisaia 53:4-7 ji buru nkwa nke kachasi ike nime agba ochie nke negosi na Jizos bu onye ngbanwe ayi? Ndi afo ama ekpep n̄wed emi?
Gịnị ka mkpụrụ ego ọlaọcha 30 pụtara ná mkpughe nke Zekaraịa onye amụma na olee otú e si mezuo amụma ya n'Agba Ọhụụ? Jizọs Ọ bụ Jehova, Jehova?
Gịnị mere ozi dị na Matiu 20:28 ji dị oke mkpa ma nwee ike ịgbanwe ọdịbendị na omenala niile na obodo ọ bụla?
Gini mere Jizos ji zobe onwe ya ma obu gbapu ma obu kwagaghari na Lebanon ma obu Syria n'amara ihe nke chere ya na Jerusalem?
Gini b ihe di mkpà di ukwu n'etiti ekpere nke mb nke Jizos na Ogige nke Gethsemane?
Ntak emi Jizos ke Jizos ama ekeset ke n̄kpa ama akabade mme mbet Esie ke ntak emi ẹkekpọn̄de enye ke ndikpep mmọ mkpa emi ẹkedọhọde ke idiọkn̄kpọ ke Agba ochie ?
Mgbe ha natara ike nke Mmụọ Nsọ, olee otú Pita na ndịozi ndị ọzọ si maa ndị Juu aka? Gịnị ka "ndị nkịtị" nke ndị Juu na ebubo ugboro ugboro nke ndịozi pụtara?
Gini mere ndi ndi Alakụba ji cho onwe ha ikwere na ihe omuma nke obe nke Jizos na nzoputa nke emere ha? Gịnị ka anyị kwesịrị ịrịọ Nna anyị nke eluigwe ka o nye ha?
N'ihi gịnị ka akụkọ akụkọ akụkọ Tacitus na Flavius ​​banyere Jizọs na ọnwụ Ya n'obe dị mkpa maka ndị Alakụba?
Olee ihe akaebe na-abịa site na graffiti (ihe osise ndị dị na mgbidi) nke onye na-anọ n'elu obe na isi nke ịnyịnya ibu n'okpuru okpuru ala nke Palladium na Rom?
Gini mere Jamal Abd al-Nasser ji kwenye site na usoro mgbasa ozi di iche iche ndi Alakụba mara onye kpogidere Kraist n'obe? Kedu ihe bụ iwu nke nkwupụta ya?
Olee otú akwụkwọ ndị Juu nke oge a si kọwaa obe n'obe Kraịst?
Ugboro ole ka kor'an na-akọ banyere igbu ndị amụma site n'aka ndị Juu? Gini mere Muhammad, nke megidere nkwube nke onwe ya, ghotara onwu Kraist?
Dị ka àmà ịgbagha na Sura Maryam 19:33 si kwuo gịnị ka Kraist kwuru banyere ọmụmụ Ya na ọnwụ? Kedu ihe nke Akwụkwọ Nsọ nwere ike ịtinye n'amaokwu a dị mkpa?
Olee uzo di iche na uzo di iche iche gi puru ichoputa n'agbata àmà nke Kraist (Sura Maryam 19:33) na akuko Djibril banyere Yahya (Sura Maryam 19:15)?
N'ihi gịnị ka Chineke ji kpọọ "onye kasịsị aghụghọ n'ime ndị nduhie niile" na njedebe nke nkwụsị nke Kraịst? Olee otú Bible si akọwa okwu a?
Gịnị bụ aghụghọ kasị ukwuu nke Allah na ndị Juu na Kraịst?
Olee otú Muhammad si nwee ike ime ka Ndị Kraịst na ndị Alakụba mee ihe n'otu oge na-eji otu mkpụrụokwu akọwa ọnwụ Kraịst? Kedu ihe atọ pụtara nke okwu a?
Gini mere kor'an ji kwado nragota nke Kraist rue Allah ma n'otu oge ahu ghogho uzo ogbugbu ya?
Gini, dika Islam si kwuo, nke a putara na Kraịst dị ndụ ma Muhammad anwụọla?
Gịnị mere okwu nke ndị Juu na Sura al-Nisa '4:157 ji bụrụ onye na-enyo enyo ma na-ezighị ezi?
Gini mere uzo ji ju Muhammad anya na "ha egbughi ya (na) ha emeghi ka ha kpogide ya" nye ayi ohere puru iche iji gosiputa na ekpogidere Nwa nke Meri n'obe?
Olee otu ndi na-akọwa Muslim si kọwaa okwu nke kor'an na ekwesighi ikpogide Kraist n'obe kama o mere ka o di ka onye a kpogidere n'obe?
Gini mere oji nagh i aba uru iji nwaa igosi obe nke obe nye Kraist obula ma oburu na ya onwe ya achughi ihe di otua?
Olee otu anyi ga esi eduzi ndi Alakụba ka ha ghọta na onye nmehie bu onye ikpe?
Olee otú kor'an si ekwu na ndị Alakụba nile aghaghị ịbanye na hel?
N'okwu nkọwa nke Abraham nke na-achụ nwa ya nwoke n'àjà nye Onye Kasị Elu, gịnị mere ịkpọku Chineke na Abraham na-enye anyị ohere pụrụ iche iji kọwaara ndị Alakụba ụdị ọnwụ nke ọnwụ Kraịst?
Gini mere ayi puru igosi ndi Alakpere dika uzo nke okwu nke kor'an na "obughi onye obula (dika nmehie) puru ibu ibu nke onye ozo"?
Ọ bụ na Kraịst bụ Nwa Atụrụ Chineke kwukwara maka nmehie nile nke ndị Alakụba niile mgbe ọ nwụrụ n'elu obe, ka Jizọs ga-anwụ ọzọ maka ndị Alakụba n'ụzọ pụrụ iche? Ọ bụrụ na e mechara kpuchie mmehie ha site n'aka Chineke, gịnịzi mere Ndị Kraịst anaghị agwa ndị Alakụba ihe ndị ruuru ha n'eluigwe?
Dị ka ahụmahụ gị si dị, nke akụkọ banyere Oziọma na nhụjuanya nke Kraịst na-anabata ndị Alakụba mgbe mgbe?
A na - enye onye ọ bụla nọ na ajụjụ a ohere iji akwụkwọ ọbụla dị ya mma na ịjụ onye ọ bụla a pụrụ ịtụkwasị obi mara ya mgbe ọ na - aza ajụjụ ndị a. Anyị na-echere azịza gị ndị e dere ede tinyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na e-mail gị. Anyị na-ekpe ekpere maka gị Jizọs, Onyenwe anyị dị ndụ, na Ọ ga-eme ka nghọta, zipu, nduzi, na-ewusi ike, na-echebe ma na-anọnyere gị kwa ụbọchị nke ndụ gị!
Page last modified on July 24, 2020, at 12:51 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)